दोर्जे शुग्देनका मानिसहरू तीन तल्लो लोकहरूमा जाँदैनन् | Tsem Rinpoche
Jan 27, 2020 | Views: 196
विश्वभरिका प्रिय साथीहरू,
गत राती मैले तिब्बती नेतृत्वको प्रबुद्ध संरक्षक दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमाथिको प्रतिबन्ध उचित छ भनेर सिद्ध गर्न खोजेका थप झूटा दाबीहरूलाई सम्बोधन गरेँ।
तिब्बती नेतृत्वले बितेका वर्षभरि बारम्बार दिएका कारणहरूमध्ये एक हो कि दोर्जे शुग्देन एक सानो प्रथा हो, जसमा धेरै मानिसहरू आबद्ध छैनन्। यसैको कारण उनीहरू दाबी गर्छन् कि यो अभ्यास तिब्बती बौद्ध धर्मको मुख्य धार भन्दा कुनै किसिमले फरक छ, जो एक सानो समूहद्वारा गरिन्छ जसले बौद्ध धर्मको मुख्य सिद्धान्तहरू पछ्याउन अस्वीकार गर्छन् र त्यसैले उनीहरूको अभ्यासलाई प्रतिबन्ध लगाई यो धर्म समाप्त पार्नुपर्छ।
सबैभन्दा पहिला, चाहे अभ्यास सानो छ वा छैन, यो कुनै पनि कुरामा प्रतिबन्ध लगाउन वैधानिक कारण होइन। यद्यपि यो एक होस् वा दुईवटा मानिसहरू वा चालिस लाख मानिसहरूको(दोर्जे शुग्देनको विषयमा), जबसम्म यो उनीहरूको विश्वास हो, उनीहरूलाई आफ्नै धर्म रोज्ने र विश्वास गर्ने, यसको अभ्यास र धर्मविधिहरूमा संलग्न हुने स्वत्नत्र रूपमा अधिकार छ। कुनै पनि कुरामा कति जना संलग्न छन् भन्ने कुराले मान्यता राख्दैन, साँचो प्रजातन्त्रमा उपासकहरूको संख्या अप्रासंगिक छ।
दोस्रो कुरा तिब्बती नेतृत्वले यो कारण दिनुमा कुनै पनि अर्थ लाग्दैन किनभने पूर्ण संख्यामा उच्च अहोदाका लामाहरू र भिक्षुहरू दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमा पछिल्ला धेरै वर्षदेखि संलग्न छन् वा संलग्न थिए। यी उच्च अहोदाका लामाहरूको कुल दसौँ हजारौँ विद्यार्थीहरू थिए जसलाई उनीहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गराएका थिए र ती विद्यार्थीहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई यो अभ्यास दिए र यसैगरी यो प्रक्रिया पछिल्लो ४०० वर्षदेखि चलिआएको छ।
अनि यो कारण – “दोर्जे शुग्देनको अभ्यास प्रेतात्माको उपासना हो।” – दिनु अझ तर्कविहिन छ किनकि तिब्बती नेतृत्वहरूले यी लामाहरूको पुनर्जन्मप्रतिको आफ्नै पाखण्डी मान्यता देखाइरहेको छ। यो कुरा गत रातिको भिडियोको मुख्य विषयसँग जोडिन्छ, जुन यो हो कि तिब्बती नेतृत्वले भन्छ कि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नाले तिमीलाई तीन तल्लो लोकहरूमा पुर्‍याउँछ किनभने यो प्रेतात्माको उपासना हो।
भिडियोमा मैले बौद्ध धर्ममा प्राप्तिको आधारको छोटो व्याख्या दिएँ। बौद्ध धर्मावलम्वीहरूलाई सिकाइएको छ कि प्राप्ति आफ्नो प्रतिज्ञा राख्नाले उत्पन्न हुन्छ – चाहे त्यो हाम्रो शरणार्थी प्रतिज्ञा होस्, बोधिसत्व प्रतिज्ञा, दीक्षा प्रतिज्ञा वा तान्त्रिक प्रतिज्ञा। यद्यपि, यदि तपाईं आत्मा उपासनामा संलग्न हुनुहुन्छ भने, तपाईंले आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नु हुन्छ, जसले तपाईंलाई तीन तल्लो लोकहरूमा जाने कारणहरूको सिर्जना गर्दछ। कसरी ? यदि कुनै काम प्रशंसनीय हुन्छ र सदाचारी नतिजाहरूतिर डोर्‍याउँछ, त्यसोभए तर्कसंगत रूपमा भन्नुपर्दा तपाईं यो निष्कर्ष निकाल्न सक्नुहुन्छ कि यसको उल्टो काम गर्दा नकरात्मक परिणमतर्फ डोर्‍याउँछ।
त्यसैले दोर्जे शुग्देनले तपाईंलाई तीन तल्लो लोकहरूमा पुर्‍याउनुहुन्छ भन्ने दाबी तिब्बती नेतृत्वले आफ्ना समुदायलाई डर देखाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास छोड्नको लागि फैलाएको अफवाह हुन् किनभने अहिले यसले नकरात्मक रूपमा तपाईंको पुनर्जन्मलाई असर पार्छ। तिब्बती नेतृत्वको अनुसार, उनीहरूले यो अभ्यासमा रोक लगाएका छन् किनभने उनीहरू चाहँदैनन् कि मान्छेहरू तीन तल्लो लोकहरूमा जाउन् र प्रेतात्मा वा अझ नराम्रो रूपमा पुनर्जन्म होउन्। र यो तर्क तिब्बती नेतृत्वले झुटो दयालु भावना सृर्जना गर्न अझै प्रयोग गरिरहेका छन्, किनकी यसले तिब्बतीहरूलाई एक अर्कालाई अभ्यास छोड्न प्रोत्साहन दिन बाध्य गराउँछ, किन? किनकी तपाईं आफ्ना प्रियजनहरू तीन तल्लो लोकहरूमा गएको हेर्न चाहन हुन्न, के तपाईं चाहनुहुन्छ?
तर जस्तो कि मैले भनेँ, तिब्बती नेतृत्वको दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई प्रतिबन्ध लगाउने कारणहरुको खुलासा भएपछि गएका वर्षहरूको उनीहरूका आफ्नै कार्यहरू बुझ्न नसकिने र पाखण्डी छन्।
संक्षेपमा, यदि दोर्जे शुग्देनको अभ्यासले तपाईंलाई तीन तल्लो लोकमा पुर्‍याउँछ भने, तिब्बती नेतृत्वले कसरी अभ्यासमा संलग्न लामाहरूको पुनर्जन्मलाई पहिचान गरिरहेको छ त? तिब्बती नेतृत्वको अनुसार उनीहरू प्रेतात्मा वा नर्कमा पुनर्जीवित हुनुपर्ने होइन र? यी केही लामाहरूको दोर्जे शुग्देनको प्रतिबन्धको सुरूवात हुनु अघि नै मृत्यु भइसकेको थियो, जसको अर्थ उनीहरूले आफ्नो पूर्वजन्ममा अन्तिम क्षणसम्म दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गरेका थिए। उनीहरूले अभ्यास छोड्ने अवसर नै पाएनन्। त्यसैले के यी लामाहरूले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनु पर्ने होइन र? यदि उनीहरू जनावर, प्रेतात्मा वा नर्क प्राणीका रूपमा पुनर्जीवित भएका भए, उनीहरूको अवतार भनेर चिनिएका व्यक्तिहरू को हुन् त?
कसरी तिब्बती नेतृत्वसँग दोमो घेशे रिन्पोछेको पुनर्जन्मका रूपमा आफ्नै उम्मेदवार भयो? पछिल्लो दोमो घेशे रिन्पोछे एक महान् र विशिष्ट दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो र उहाँ दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्दा गर्दै बित्नुभएको थियो। उहाँले कहिल्यै पनि तथाकथित ‘प्रेतात्माको उपासनाको’ अभ्यास गर्न छोड्नुभएन र मानौँ आफ्नो जीवनको अन्त्य सम्म आफ्नो प्रतिज्ञा ‘तोडिरहनुभयो’, अनि तिब्बती नेतृत्वले भने जस्तै, किन उहाँले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुभएन? किन उनीहरूले उहाँको अवतारका रूपमा एक उम्मेदवार पहिचान गरे?
अर्को मुख्य उदाहरण पवित्र क्याब्जे त्रिजंग दोर्जेच्यांग, १४औँ पवित्र दलाई लामाका कनिष्ठ शिक्षक। क्याब्जेले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो, आफ्नो अन्तिम क्षण सम्म र कहिल्यै अभ्यास त्याग्नुभएन। तिब्बती नेतृत्वको अनुसार, यसको अर्थ दलाई लामाका आफ्नै शिक्षक प्रेतात्माका उपासकका रूपमा बित्नुभयो र त्यसकारणले उनीहरूले अभ्यासमा लगाएको प्रतिब्धको आधारमा, त्रिजंग रिन्पोछेले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुपर्ने थियो। त्यसो भए किन दलाई लामा आफैँले आफ्ना शिक्षकका अवतारका रुपमा त्रिजंग चोकत्रुल रिन्पोछेको पहिचान गर्नुभयो?
मैले गत रातीको भिडियोमा धेरै अन्य उदाहरणहरू दिएँ, जसमा पवित्र १०औँ पान्चेन लामा दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता भएको कुरा पनि छ। तिब्बती नेतृत्वले उनीहरूको ११औँ पान्चेन लामाको पदका लागि छानेका हराएका उम्मेदवारको खोजका लागि विशाल विश्वव्यापी अभियान चलाएको छ, तर किन? उहाँको अघिल्लो जीवन दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ताको रूपमा बित्यो त्यसैले त्यहाँ ११ औँ पुनर्जन्म हुनु नपर्ने हो। एकपटक फेरि, अभ्यास प्रतिबन्धको उनीहरूको तर्क अनुसार, १०औँ पान्चेन लामा प्रेतात्माको रूपमा पुनर्जीवित हुनुपर्थ्यो।
त्यसैले तिब्बती नेतृत्वले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गरेका उच्च लामाहरू र भिक्षुहरूको अवतारको पहिचान गरेको थुप्रै उदाहरणहरू छन् तथापि उनीहरूले ती भिक्षुहरू, अभ्यासकर्ताहरू र ध्यान गुरुहरूको पुनर्जन्म तीन तल्लो लोकहरूमा हुन्छ भनेका छन्। मैले पनि पछिल्लो ४०० वर्षको केहि विशिष्ट दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ताहरूको सूची हेरेँ। तल गत रातीको प्रत्यक्ष भिडियो रेकर्डिङ छ। त्यसैले तपाईंले यसलाई हेर्नु भएको छैन भने हेर्नसक्नुहुन्छ वा फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्यक्ष भिडियो सभामा मसँग सामेल हुनु भएको सबैलाई धन्यवाद। यदि तपाईंसँग मैले बोलेको कुरा बारे केही प्रश्नहरू छन् भने, टिप्पणी छोड्नसक्नु हुन्छ वा अर्को प्रत्यक्ष सत्रको बेला मलाई सोध्न सक्नुहुनेछ। म आउँदा दिनहरूमा यस्ता कार्यहरू अझै गर्नेछु र म तपाईंको सहभागिता र प्रश्नहरूको स्वागत गर्दछु।
भिडियो: जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने मानिसहरू तीन तल्लो लोकमा किन जाँदैनन् भन्ने कारणहरू।
सबैलाई नमस्कार, मेरो नाम छेम टुल्कु, गादेन मठबाट। आज, हामी प्रत्यक्ष प्रसारण शिक्षण गर्दैछौँ। यो पहिल्यै रेकर्ड गरिएको नभएर साँच्चिकै प्रत्यक्ष प्रसारण हो। त्यसैले यदाकदा कतै गल्ती भइहाल्यो भने मलाई क्षमा गर्दिनुहोस्। आज, म कसरी यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गरेमा, तपाईं तीन तल्लो लोकमा जानुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने बारे कुरा गर्न चाहन्छु।
बौद्ध धर्ममा, भगवान् बुद्धको शिक्षाको अनुसार ६ वटा लोकहरूमा हामी पुनर्जन्म लिन सक्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। माथिल्ला लोकहरू भनेका देवीदेवताहरूको लोक, अर्धदेवहरूको लोक र त्यसपछि मान्छेहरूको लोक। यी तीन माथिल्ला लोकहरू हुन्। तीन तल्लो लोकहरू (तिब्बती: ङे सुङ्ग) भनेका नर्क, भोकाएका भूत वा प्रेतात्माहरूको लोक पशुलोक। यी लोकहरूभित्र पनि त्यहाँ अरू थुप्रै विभागहरू छन्। जस्तै नर्कको थुप्रै प्रकारहरू हुन्छन्, सुरूवात चिसो नर्क र तातो नर्क। त्यस्तै आत्माको लोकमा पनि थुप्रै प्रकारका आत्माहरू हुन्छन्।
सामान्यतया, आत्माहरू बिना कुनै आकृतिको जीव हुन्। तिनीहरू विचारको गतिमा यात्रा गर्छन् र उनीहरू भौतिक वस्तुहरू जस्तै पर्खाल र ढोका पार गर्न सक्छन्। उनीहरू उड्न सक्छन् र जमिनमुनिबाट जान सक्छन् र दिन र रातको समयमा अध्याँरोमा देखा पर्न सक्छन्। तिनीहरू सोचेको गतिमा कहिँ पनि देखा पर्न सक्छन्।
आत्माको रूपमा पुनर्जन्म लिनुको मुख्य कारण कन्जुसी र स्वार्थीपना हो। त्यसैले जब आत्मा कन्जुसी र स्वार्थीपनाको कारणले पुनर्जन्म लिन्छ, उनीहरू त्यही स्थितिमा रहन्छन् र यो सयौँ वा हजारौँ वर्षसम्म यस्तै रहिरहन सक्छन्। केही आत्माहरू धेरै रिसले गर्दा पुनर्जन्म लिन्छन्। उनीहरूको मृत्यु अगाडि उनीहरूलाई केही गरिएको हुन्छ, जसले उनीहरूलाई क्रोधित तुल्याएको हुन्छ। केही आत्माहरू त्यस रूपमा पुनर्जन्म लिन्छन् किनभने उनीहरूलाई केही हिंसात्मक कार्यहरू गरेको वा उनीहरूको अधुरो कार्य समापन गर्नु थियो। उनीहरू धन सम्पत्ति वा कुनै मान्छेप्रति लगावका कारणले पनि त्यस्तै हुन सक्छन्।
मान्छेहरू आत्माको रूपमा पुनर्जन्म लिनुको थुप्रै कारणहरू छन्। मान्छे मात्र होइन जनावरहरू पनि आत्माको रूपमा पुनर्जन्म लिन सक्छन्। आत्माहरू विविध जीवन जिउँछन्। उनीहरू एक क्षणको लागि वा सयौँ हजारौँ वर्षसम्म बाँच्न सक्दछन्।
त्यसैले के हुन्छ भने जब आत्मा पुनर्जन्म लिन्छन् यो राम्रो कारण वा सोचाइले गर्दा होइन। आत्माको पुनर्जन्म सामान्यतया नकरात्मक मानिन्छ। त्यसैले आत्माको रूपमा पुनर्जन्म लिनु तीन तल्लो पुनर्जन्ममध्ये एक हो, जसलाई हामी (ङे सुङ्ग) भन्दछौँ।
बौद्ध धर्मावलम्वीको जीवन चक्र। विस्तार गरेर हेर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसैले म फेरि दोहोर्‍याउँछु, यदि तपाईंको कुनै व्यक्ति, वस्तु, ठाउँ वा अवधारणासँग धेरै लगाव छ भने र अन्तिम कुराको रूपमा तपाईं त्यही कुरा सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं आत्माको रूपमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ र त्यही वस्तुको वरिपरि रहनुहुनेछ, त्यसलाई जोगाउन वा नजिक रहन। यदि कोही त्यसको बाटोमा आए कोही आत्मा डरलाग्दो पनि बन्न सक्छ। तिनीहरू हानिकारक र गहिरो चोट पुर्‍याउने पनि हुन सक्दछन्।
मानौँ एक व्यक्ति घरमा बसिरहेको बेला बिते, उसले महसुस गर्नेछ कि घर अझै पनि उसको नै हो। त्यसैले यदि तपाईं त्यो घरमा सर्नुभयो भने,तपाईंले अलौकिक घटनाहरूको अनुभव गर्नुहुनेछ किनभने उनीहरूले महसुस गर्छन् कि तपाईं उनीहरूको घरमा घुस्दै हुनुहुन्छ। त्यसो भए तपाईं कसरी उनीहरूको ठाउँमा घुस्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूले महसुस गर्छन् कि तपाईं उनीहरूको घरमा हुनुहुन्छ।
त्यसकारण तपाईं उनीहरूको घरमा हुनुहुन्छ भनेर महसुस गराउन, उनीहरूले तपाईंलाई सताउने, सामानहरू सार्ने, आवाजहरू निकाल्ने, तपाईंलाई तर्साउने, धकेल्ने, छुने, तपाईंलाई नोक्सान पुर्‍याउने गर्दछन्।
सामान्यतया, आत्मा नकरात्मक सोचाई, नकरात्मक प्रेरणा, नकरात्मक प्रार्थना, मोह, क्रोध, अधुरा कामहरूबाट उत्पन्न हुन्छन् र सायद जब मान्छे भयानक तरिकाले मर्छन्, उनीहरू आत्माको रूपमा फर्कन्छन्।
तपाईं सोच्नुहुन्छ होला कि किन जो मान्छे अपराधहरू वा डरलाग्दो परिस्थितिको शिकार हुन्छन् ती मान्छेहरू आत्माको रूपमा पुनर्जीवित हुन्छन्? यो होइन कि उनीहरू बाहिरी शक्ति, भगवान्, बुद्ध वा देवताद्वारा दण्डित भइरहेका छन्,उनीहरू पुनर्जन्म लिनु दण्डित गरिएको होइन।
उनीहरूले सोचेको अन्तिम कुराले विभिन्न लोकमा पुनर्जन्म लिने अत्यक्त कर्मलाई जगाउँछ। त्यसैले यदि उनीहरूले मृत्युको समयमा निश्चित कुनै कुरा सोच्दछन् र त्यो कुरालाई बलियो रूपमा याद राख्दछन् भने, तिनीहरू पीडित भएता पनि आत्माको रूपमा फर्किन्छन् र कोही हानी गर्ने आत्माको रूपमा फर्किन्छन् किनभने यो अपराध गर्ने होइन तर मर्न लागेको मान्छेको मनोवृतिले ल्याउने कर्मको कारणले माथिल्लो वा तल्लो लोकमा पुनर्जन्म पाउँछ।
पवित्र क्याब्जे जोङ्ग दोर्जे च्यांग। विस्तार गरेर हेर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
मैले अघिल्लो भिडियोमा वर्णन गरेको छु र नयाँ व्यक्तिहरूको लागि म फेरि थोरै दोहोर्‍याउँन चाहन्छु। म ५२ वर्षको भएँ र १८ वर्षको उमेरमा मैले मेरो मुल शिक्षक जो गुरु, महान् विद्वान, योगी, ध्यानी र बौद्ध धर्मको सम्प्रदाय गेलुग्पाको सबैभन्दा उच्च लामा अवतार, पवित्र क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछेबाट अरू धेरै अभ्यासहरूको सँगै दोर्जे शुग्देनको अभ्यास पनि पाएँ।
पवित्र क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछे मेरो मूल शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ नै त्यो एक व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मलाई जीवन कसरी जिउनु पर्छ र मैले के गर्नुपर्छ भनेर मार्गदर्शन दिनुभयो। क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछे नै हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले भिक्षु बन्छु र धर्मको अध्ययन गर्छु भनेर वाचा गरेको थिएँ। यो पनि पवित्र क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछे नै हुनुहुन्थ्यो जसलाई मैले जीवनभरि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ।
तिब्बती बौद्ध धर्मको अनुसार,जब तपाईं आफ्नो लामालाई केही गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ, तब कुनै पनि लामा, संस्था, संगठन वा मठले तपाईंको लामाले तपाईंलाई दिएको निर्देशनहरूलाई अवहेलना गर्न सक्दैनन्। लामाले दिनुभएका निर्देशनबाट तपाईंलाई क्षमा गर्न खुद वास्तविक लामा आफैँले मात्र सक्नुहुन्छ, जसलाई तपाईंले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो वा जसले तपाईंलाई निर्देशन दिनुभएको थियो।
उदाहरणको लागि, पवित्र क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछेले मलाई जीवनभरि अभ्यास गरि बाधाहरू हटाउने रक्षक दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न विशेष निर्देशन दिनुभयो। मैले पवित्र क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछेलाई वचन दिएँ र त्यस्तै गर्नेछु भनेर प्रतिज्ञा लिएँ। जोङ्ग रिन्पोछे चाहे जीवित हुनुहुन्छ वा उहाँ बितिसक्नुभयो, मैले प्रतिज्ञा गरेको छु। त्यसैले यो आध्यात्मिक इमान्दारीताको कुरा हो।
आध्यात्मिक इमान्दारी भनेको तपाईंले तपाईंको लामालाई दिनुभएको जुनसुकै प्रतिज्ञा हो, चाहे उहाँ जीवित हुनुहुन्छ वा बितिसक्नुभयो, तपाईंले त्यो पूरा गर्नुपर्छ। प्रतिज्ञा भनेको प्रतिज्ञा नै हो र त्यसैले, मैले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास धम्की, दबाब र आलोचना सहेर पनि जारी राखेको छु। दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नाले, म दलाई लामा विरूद्ध छु भनेर छानिएको छु। म राक्षस र प्रेतात्माको अभ्यास गर्देछु भनेर आलोचित भएको छु। मलाई असभ्य नामहरूले बोलाइएको छ र मेरो जीवन लिने धम्की दिइएको छ। दोर्जे शुग्देनको मेरो अभ्यासको कारणले गर्दा म बारम्बार सामाजिक सञ्जालमा अपमानित भएको छु।
मलाई चिनियाँ जासूस भनिएको छ – जसले चिनियाँ सरकारको लागि काम गर्दछ र तिब्बती समुयदायहरूको बीचमा फाटो ल्याउन पैसा पाएको छ र फाटो ल्याउन दोर्जे शुग्देनलाई साधनको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। पवित्र १४औँ दलाई लामाले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास नगर्नु भन्नु नै यसको कारण हो। त्यसैले तिब्बती समुदायमा दलाई लामाले जे भन्नुहुन्छ त्यही नै कानुन हो, यो नियम हो र पछ्याउनुपर्छ। अन्य देशको नेताहरूलाई गरेको जस्तो होइन, त्यसैले यदि तपाईंले दलाई लामाको खण्डन गर्नुहुन्छ र यदि तपाईं दलाई लामाले सिफारिस गरेको कुराको विरोध गर्नुहुन्छ भने यसको अनुमति छैन। एसियाली समाजमा, हामी सबै कुरा सिधा व्यक्त गर्दैनौँ।
तिब्बती समाजमा, दलाई लामाले जे भन्नुहुन्छ, त्यहि नै कानुन हो, यो नियम हो र मान्नु नै पर्छ।
उनीहरू कुरा घुमाएर गर्न रूचाउँछन् र अर्को व्यक्तलाई ‘मौका’ दिन्छन्। त्यसैले तिब्बती समुदायमा, उनीहरू सधैँ भन्छन् कि तपाईंसँग दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने विकल्प छ। तपाईंलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता छ। तपाईंसँग तपाईंको आफ्नै मठहरू हुनाले तपाईंलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न अनुमति छ र तपाईंसँग अभ्यास गर्ने स्वतन्त्रता छ।
यो एकदमै भ्रामक छ किनभने यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले दलाई लामाको शिक्षामा भाग लिन पाउनुहुन्न। यदि तपाईंले Tibet.net हेर्नुहुन्छ भने, तिब्बती निर्वासन सरकारको आधिकारिक वेबसाइट जुन धर्मशाला, उत्तरी भारत, हिमाचल प्रदेशबाट आरम्भ भएको छ, तिब्बती सरकारको संविधानले भन्छ कि यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास छोड्नुहुँदैन भने तपाईंले दलाई लामाको शिक्षामा भाग लिन पाउनुहुन्न। वास्तवमा तपाईंले दलाई लामाको प्रवचनमा भाग लिन पाउनुहुन्न। तपाईंले तिब्बती सरकारमा काम गर्न पाउनुहुन्न वा तिब्बती सरकारमा कुनै काम संचालन गर्न पाउनुहुन्न। तपाईंले तिब्बती सरकारद्वारा प्रायोजित अस्पताल, विद्यालय र अन्य सुविधाहरू लिन पाउनुहुन्न। हो, त्यो अहिलेको समयमा भइरहेको छ।
[त्यसैले यदि दर्शक माझ कसैले Tibet.net पेज जसले सो कुरा राखेको छ, अपलोड गर्नुभएमा, हाम्रो दर्शकहरूले पनि देख्न पाउनुहुनेछ। के कोही एकले मेरो लागि त्यति गरिदिनुहुन्छ? के कोही एकले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ, के तपाईंलाई थाहा छ म के बारेमा कुरा गर्दैछु, Tibet.net है? त्यसो भए माथि अपलोड गर्दिनुहोस् ताकि हाम्रा श्रोताहरूले देख्न सकुन्। http://tibet.net/important-issues/dolgyal-shugden/]
तपाईंले तिब्बती संविधानमा स्पष्ट रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ कि यो एक संस्थागत कानुन हो कि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न पाउनुहुन्न।[र तपाईं पवित्र दलाई लामाले यसो भन्दै गर्नुभएको भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ, र हाम्रा एक साथीले यहाँ एक लिङ्क राख्नु हुनेछ: https://www.youtube.com/watch?v=YQa0mZEtRGA] यस भिडियोमा, पवित्र दलाई लामा भन्दै हुनुहुन्छ कि यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने,कृपया तपाईंलाई मठबाट हटाउनुहोस्। उहाँ उनीहरूलाई मठबाट निकाल्दा आनन्दित हुनुहुन्छ र उहाँ उनीहरूलाई निकालेको हेर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईं उनीहरूलाई मठबाट निकाल्न डराउनुहुन्छ भने तपाईं दलाई लामाले त्यसो भन्नुभएको छ भन्न सक्नुहुन्छ। [यहाँ एक भिडियो राखिएको छ जसमा दलाई लामा आफैँले त्यस्तो भन्नुभएको छ।]
त्यसैले, निर्वासित तिब्बती सरकारको एक विशेष खण्ड छ जसले तपाईंलाई तपाईंको धर्म- दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नबाट रोक्छ। यो धर्मको स्वतन्त्रता होइन।
जब पवित्र दलाई लामाले मान्छेहरू जो दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्छन् उनीहरूलाई मठ छाडेर जान आग्रह गर्नुभयो, यो दोर्जे शुग्देनलाई त्याग्न दिइएको सल्लाह होइन। त्यो तपाईंसँग कुनै विकल्प छैन भन्ने एसियाली तरिका हो। यदि तपाईंले यो कुरा मान्नुहुँदैन भने, तपाईंलाई समाजको मुख्यधारबाट अलग्याइनेछ र धेरै दोर्जे शुग्देन लामाहरूलाई यस्तै गरिएको छ।
अब सोच्नुहोस् कि, स्वतन्त्र संसारका नेताहरू जस्तै जापानी प्रधानमन्त्री, अमेरिकी राष्ट्रपति, अङ्ग्रेज प्रधानमन्त्री वा इटालीका प्रधानमन्त्रीले यसो भन्छन्- “जो लुदेरान, ब्याप्टिस्ट वा क्याथोलिकमा विश्वास राख्ने काम गर्छन्, उनले सरकारमा काम गर्न पाउँदैनन्, मेरो सभाहरुमा सामेल हुन् पाउँदैनन्, विद्यालयमा जान पाउँदैनन् वा अस्पतालहरू जुन सरकारले बनाएका छन् त्यहाँ उपचार गर्न पाउँदैनन्।” २१औँ शताब्दीको स्वतन्त्र विश्वका नेताहरूले मानिसहरूलाई यदि निर्धारित कुनै धर्मको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले अरू नागरिक जसरी सेवा सुविधाहरूको उपभोग गर्न पाउनुहुन्न भनेको के तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? यो प्रजातान्त्रिक होइन।
धर्मशालामा रहेका निर्वासित तिब्बती सरकारले आफूलाई शासनको प्रजातान्त्रिक निकाय भन्छन्, यदि तपाईं प्रजातान्त्रिक हुनुहुन्छ भने,तपाईंले आफ्ना नागरिकहरूलाई बोल्ने अधिकार दिनुपर्छ, धर्म छनोट गर्ने र जीवनयापन गर्ने आफ्नै अधिकार दिनुपर्छ। वास्तवमा, तपाईं जुनसुकै राष्ट्रियता वा आस्थाको अभ्यास गर्ने तिब्बती हुनुहुन्छ, चाहे तपाईं कालो, गोरो, पूर्वी, पश्चिमेली, अमेरिकी तिब्बती, भारतीय तिब्बती, तिब्बतीभाषी, तिब्बती भाषा नबोल्ने, दुई जाति मिश्रित तिब्बती, काग्यु, गेलुग, शाक्य, निंग्मा, बोन्पो, मुस्लिम, इसाई तिब्बती, एथिस्ट तिब्बती वा दोर्जे शुग्देन अभ्यास गर्ने तिब्बती गर्नुहुन्छ, सबै तिब्बती मानिसहरूलाई तिब्बती सरकारले समान रूपमा हेरि समान अवसरहरू दिनुपर्छ। किन? यो किनभने तिब्बती सरकारले भनेको छ कि उनीहरू प्रजातान्त्रिक छन्।
त्यसैले Tibet.net मा, तपाईं धेरै स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि त्यहाँ एक खण्ड छ जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई अपमान र निरूत्साहित गर्दैछ, त्यसो भए त्यो गलत हो। तपाईं मलाई एउटा सरकारी वेबसाईट देखाउनुहोस् जसमा कुनै पनि धर्मलाई हतोत्साहित गर्न समर्पित एक खण्ड छ।
अमेरिकामा जहाँ म हुर्किएँ, त्यहाँ शैतानहरूलाई अभ्यास गर्ने मानिसहरू पनि छन्, जहाँ तिनीहरू शैतानलाई पूजा गर्छन् र त्यसको अनुमति छ। उनीहरू प्रार्थना गर्छन्, उनीहरूको जादुटुना गर्ने धर्म छ र त्यसमा उनीहरू प्राकृतिक आत्माहरूको प्रार्थना गर्छन् र उनीहरू भूतको शक्ति उत्पन्न गर्छन्। अमेरिकामा लाखौं मानिसहरू भुडुको अभ्यास गर्छन्। भुडुको विभिन्न प्रकार हुन्छ, सेतो र कालो, भुडु विशेष गरी प्रेतात्माको शक्तिको लागि र उनीहरूलाई विशेष सहायता माग्नको लागि अभ्यास गरिन्छ।
यहाँ मान्छेहरू छन् जो लुदेरन, प्रोटेस्टेन्ट, मोर्मन, क्वेकर, प्युरीटन र आमिस रुपको इसाई धर्मको अभ्यास गर्दछन्। ब्याप्टिष्ट र क्याथोलिक अभ्यास गर्ने मान्छेहरू पनि छन्। हिन्दु धर्म मान्ने र हिन्दु धर्मको उप-समूहहरूको अभ्यास गर्ने पनि छन्। यहाँ यहूदी मानिसहरू पनि छन् र यहूदी आस्थाको विभिन्न प्रकारहरू पनि छन्। हेसिडिक र धर्मनिरपेक्ष यहूदी पनि छन्। अर्को तर्फ अमेरिकामा विभिन्न सुन्दर प्रकारका मुस्लिम धर्मावलम्वीहरू पनि छन् जसले इस्लामलाई विभिन्न विचारहरूको रूपमा अभ्यास गर्दछन्। जेन बौद्ध धर्म, महायन बौद्ध धर्म, थाई बौद्ध धर्म, थेरावडन बौद्ध धर्म जस्ता विभिन्न परम्पराको बौद्ध धर्मको अभ्यास गर्नेहरू पनि छन्। अमेरिकामा सबै खालका मानिसहरू छन् र जबसम्म तपाईं कानुनको दायराभित्र रहनुहुन्छ, कसैले पनि तपाईंलाई आफ्नो धर्म अभ्यास गर्नबाट रोक्न सक्दैन। अमेरिकाको संविधानमा कुनै अधिकार पत्र छैन जसले कुनै धर्मलाई निरूत्साहित वा प्रोत्साहन गर्दछ, त्यो सबै तपाईंको आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा भर पर्दछ। त्यस्तै प्रजातन्त्रलाई तिब्बती सरकारले पश्चिमी प्रजातन्त्रमा आधारित छ भन्छ।
दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ताहरूलाई, बौद्ध धर्मावलम्वीको रूपमा अहिले गरिएको भेदभाव भएको कारणले नै हामीले बुद्धको शरण लिनुपर्छ, उहाँको धर्म शिक्षाहरू र उहाँको आर्य स्तरको भिक्षुहरू – संघमा शरण लिनु पर्छ। त्यसो भए हामीले बुद्ध, धर्म र संघमा शरण लिनुपर्ने हो। नमो गुरु वे, नमो बुद्ध या, नमो धर्म या, नमो संघ या। नमो गुरु वे भन्नाले गुरुको शरणमा पर्नु हो जुन वज्रयनको अनुसार हो।
नमो गुरु वे, नमो बुद्ध या, नमो धर्म या, नमो संघ या
म गुरुको शरणमा पर्छु
म बुद्धको शरणमा पर्छु
म धर्मको शरणमा पर्छु
म संघको शरणमा पर्छु।
अब, यदि तपाईं तिब्बती बौद्ध धर्ममा हेर्नुहुन्छ भने, त्यहाँ देवताहरूको अतिरक्त प्रवाह छ जुन सायद बुद्ध शाक्यमुनिको समयमा अस्तित्वमा थिएन। उदाहरणको लागि, तिब्बती बौद्ध धर्ममा धेरै मान्छेहरूले बुद्ध गुरु रिन्पोछेलाई प्रार्थना गर्दछन्। उहाँ बुद्धको समयमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थेन। धेरै मानिसहरू लामा चोङ्खापाको प्रार्थना गर्दछन्। लामा चोङ्खापा बुद्धको समयमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थेन। धेरै मानिसहरू अतिशा, नरोपा र तिलोपाको मूर्तिहरू बनाउँछन्, पूजा गर्छन् र ध्यान गर्छन्। उनीहरू शान्तिदेवको पूजा गर्छन्। उनीहरू बुद्धको समयमा अस्तित्वमा हुनुहुन्थेन। तथापि, बुद्धले उहाँहरू केहिका बारेमा बताउनुभएको थियो तर प्राय: उहाँले उहाँहरू कसैको बारेमा बताउनुभएन।
त्यसो भए बुद्धले यसको बारे उल्लेख गर्नुभएन भन्दैमा यो होइन कि यो सहि धार्मिक बाटो होइन। किन? किनभने जब बुद्धले शिक्षा दिनुभयो र धर्मको चक्र घुमाउनुभयो, धेरै मान्छेहरूले यो शिक्षाको अभ्यास गर्नुभयो र पूर्ण रूपमा प्रबुद्ध हुनुभयो र जब उहाँहरू पूर्ण रुपमा प्रबुद्ध हुनुभयो, उहाँहरू शरणको लागि उचित बन्नुभयो। अनि महान् उदाहरणहरू महासिद्ध नरोपा र तिलोपा हुनुहुन्छ।
यसैले, म पवित्र दलाई लामालाई गहिरो आदरका साथ भन्छु, जब हामीले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्छौँ, उहाँले भन्नुभयो कि हामी आत्माको उपासना गरी गहिरो बौद्ध मार्गलाई विनाशको खतरातिर बढाउँदैछौँ। म फेरि दोहोर्‍याउँछु, पवित्र दलाई लामाले धेरै पटक यसो भन्नुभएको छ कि यदि हामीले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्‍यौँ भने हामीले दोर्जे शुग्देनलाई महत्त्वपूर्ण बनाउँछौँ र उहाँलाई हाम्रो प्रार्थनाको पहिलो रोजाई बनाउँछौ, त्यसपछि त्यहाँ हामी खतरा ल्याउँछौँ कि तिब्बती बौद्ध धर्मको गहिरो बाटो आत्मा उपासनातिर धकेलिन्छ।
म पवित्र दलाई लामाको कुराप्रति पूर्णतया सहमत छु। त्यहाँ कुनै गेलुग लामा हुनुहुन्न जसले दोर्जे शुग्देनलाई बुद्धभन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ वा चोङ्खापाभन्दा उच्च बनाउनुहुन्छ। कोहि पनि हुनुहन्न। कहिल्यै पनि हुनुहुन्थेन। तर धेरै गेलुग्पा लामाहरू भने पछिल्लो ४०० वर्षमा हुनुहुन्छ जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास १००% गर्नुभएको छ।
क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछेको अनुसार, दोर्जे शुग्देन र उहाँको अभ्यासमा गरिएको टिप्पणी, [यदि तपाईं टिप्पणी डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो अद्भुत टोलीका लेखकहरूले मेरो ब्लग पोस्टमा लिङ्क अपलोड गर्नेछन्, जसमा पवित्र त्रिजंग रिन्पोछेले दोर्जे शुग्देनको बारेमा शिक्षाहरू दिनुभएको सेट डाउनलोड गर्न सकिनेछ। यो तिब्बती र अंग्रेजीमा छ, हैन? ठिक छ। उनीहरू अहिले तपाईंको लागि अपलोड गर्दै छन्: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/music-delighting-the-ocean-of-protectors-a-definitive-guide-to-dorje-shugden-by-trijang-rinpoche.html] अब तपाईं यसलाई आफ्नो समय अनुकुलमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
अब, त्रिजंग रिन्पोछे एक साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न, उहाँ साधारण लामा हुनुहुन्न, साधारण व्यक्ति, साधारण घेशे र निश्चित रूपले एक साधारण अभ्यासकर्ता हुनुहुन्न। पवित्र १४ औँ दलाई लामालाई सिकाउनको लागि क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछे, सन् १९५० को दशकमा तिब्बत शासनबाट, तिब्बतको ओरेकलहरूबाट, गादेन, ड्रेपुंग र सेराका महान गुरुहरूबाट चुनिनुभएको थियो।
अब त्यसका बारेमा सोच्नुहोस्। १४ औँ दलाई लामा अवलोकितेश्वरको अवतार हुनुहुन्छ। उहाँ बुद्ध अवतार हुनुहुन्छ, करुणा बुद्ध अवतार। म यसमा विश्वास गर्दछु। तिब्बतमा, साधारणतया: उनीहरूले जो कुनै लामालाई उहाँको गुरुको रूपमा छनौट गर्दैनन्। तपाईं बुझ्नुहोस्, अवलोकितेश्वर /चेन्रेजिगको अवतारले यस भिक्षुलाई ढोग गर्नुहुन्छ। उहाँले शिक्षा, प्रवचन, मन्त्रहरू, दीक्षा, टिप्पणी र सम्पूर्ण बुद्धको सुत्र र तन्त्र, यहि गुरुद्वारा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
त्यसोभए, के तपाईंलाई लाग्छ कि त्यो समयको तिब्बती सरकार, तिब्बती उच्च लामाहरू र ओरेकलहरूले जो कोही साधारण लामालाई दलाई लामाको प्रशिक्षकको रूपमा छान्नुहुनेछ? निश्चित रूपमा छान्नुहुँदैन।
त्यसोभए, हजारौँ प्राप्ति, प्रबुद्ध र विद्वान्, गादेन, सेरा र ड्रेपुङको शैक्षिक गुरुहरूमध्ये, क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछे पक्कै पनि बालक दलाई लामाको शिक्षा मार्गदर्शन गर्न, प्रतिज्ञाहरू, सम्पूर्ण काङ्ग्यूर र टाङ्ग्यूरको शिक्षाहरू र प्रसारणहरू गर्न, भगवान बुद्ध र अरु दिग्गजहरूका मौखिक र टिप्पणी शिक्षणहरु यस गुरुलाई दिन चुनिनुभएको थियो।
आज, दलाई लामा महान् बौद्ध गुरुहरू मध्ये एक सिद्ध गुरु हुनुहुन्छ जसले यस ग्रहको शोभा बढाउनुभएको छ। जब उहाँले बोल्नुहुन्छ, हजारौँ उहाँका शिक्षाहरूमा उपस्थित हुन्छन्। निश्चित रूपमा, उहाँ एक विद्वान्, महान् गुरु र एक बौद्ध भिक्षु हुनुहुन्छ। यो शिक्षाहरू उहाँको गुरु, पवित्र क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांगबाट आएको हो। दलाई लामालाई शिक्षा दिन र मार्ग निर्देशन गर्नको लागि त्रिजंग दोर्जे च्यांगलाई छानियो, र उहाँलाई एक उत्कृष्ट गुरुको रूपमा मानिन्थ्यो, जुन उहाँ हुनुहुन्छ।
अब, त्रिजंग रिन्पोछेको जीवनको अन्तिम ३०-४० वर्ष, उनको पछिल्लो अवतार, उनले १४औँ दलाई लामालाई सानै उमेरबाट शिक्षा दिनदेखि घेशेको रूपमा परीक्षा उत्तीर्ण गर्नसम्म १००% ध्यान दिनुभयो। त्यसैले त्रिजंग रिन्पोछेले आफ्नो विशाल ज्ञान, शिक्षा, ज्ञान र टिप्पणीहरू युवा दलाई लामामाथि खन्याउनुभयो। र दलाई लामा, आफ्नो मूल गुरु क्याब्जे त्रिजंग रिन्पोछे र क्याब्जे लिङ्ग दोर्जे च्यांगको करुणाबाट आज तीक्ष्ण विद्वान हुनुभएको छ।
अब, तिब्बती नेतृत्व र अन्य मानिसहरू भन्छन्, “यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं तीन तल्लो लोकमा जानुहुनेछ।” तीन तल्लो लोकको वास्तविक अर्थ भनेको आत्मा/ भूतको रूपमा, पशु वा नर्कको रुपमा पुनर्जन्म हुनु हो, किनकि तपाईंले आफ्नो शरण प्रतिज्ञाको उल्लंघन गर्नुभएको छ। अब शरण प्रतिज्ञा के-के हुन्? यसमा शरीरका तीनवटा, वचनका चारवटा र चित्तका तीनवटा प्रतिज्ञा पर्छन्।
शरण प्रतिज्ञा – शरीरका तीनवटा: हत्या नगर्नु, चोरी नगर्नु र यौन दुर्व्यवहार नगर्नु हो। वचनका चारवटा भनेको विभाजित गर्ने बोली, कठोर शब्दहरू, अनुत्पादक गफ र झूटो बोल्नु हो। तपाईं झूटो बोल्न पाउनुहुन्न। त्यसपछि चित्तका तीनवटा भनेका ईर्ष्या, घृणा, द्वेष र गलत दृष्टिकोण हुन्।
त्यसोभए, जब हामी हाम्रो गुरुबाट शरण लिन्छौँ –
नमो गुरु वे
नमो संघ या
हामीले त्यस दिनदेखि सबैलाई यी दस नकारात्मक क्रियाकलापहरूबाट टाढा रहने प्रतिज्ञा गर्छौँ जुन हामीले लिएका शरण प्रतिज्ञाहरूबाट हुन्। हाम्रो शरण प्रतिज्ञाको आधारमा, हामी ध्यान, अभ्यास र हाम्रा पुर्खाहरूको आशीर्वाद पाउन सक्षम हुन्छौँ। शरण प्रतिज्ञाको आधारबाट हामीले भिक्षु र भिक्षुणीको प्रतिज्ञा लिन सक्छौँ। शरण प्रतिज्ञाको आधारमा, हामीले बोधिसत्व प्रतिज्ञा लिएर भएर बोधिचित्त – जङ्गचुब सेम्पा गेपा उत्पन्न गर्न सक्छौँ।
शरण प्रतिज्ञाको आधारबाट हामीले तन्त्रयन प्रतिज्ञा लिन सक्दछौँ – लामा चोङ्खापा छेन्पो मार्ग अनुसार तन्त्रको ती प्रतिज्ञा जुन स्याङ दे जिग सुममा प्रतिष्ठापन गरिएको छ, जुन यमन्तका, गुह्यासमाज र हेरूकाका प्रतिज्ञाहरु हुन्।
त्यसकारण मन्त्रयनको मार्गमा, प्राप्तिहरु पाउनका लागि, व्यक्तिले तन्त्रयनको प्रतिज्ञा लिनुपर्दछ र ती प्रतिज्ञाहरू बोधिसत्त्व प्रतिज्ञा – बोधिचित्तको प्रतिज्ञामा आधारित छन्, र त्यसको आधार शरण प्रतिज्ञाहरु हुन्। त्यसैले, तपाईंको शरण प्रतिज्ञा तोडिने बितिकै सबै समाप्त हुनेछ।
तपाईंको शरण प्रतिज्ञा नै तपाईंको शिग्देन हो, त्यो नै तपाईंको आधार हो। प्रतीक वा बिम्बको प्रयोग गर्नु पर्दा तपाईंको बोधिसत्त्व प्रतिज्ञाहरू पर्खालहरू जस्तै हुन् र तपाईंको तांत्रिक प्रतिज्ञाहरू छत जस्तै हुन्।
त्यसकारण, यदि तपाईंले जग हटाउनुभयो भने, पर्खालहरू भत्कनेछन् र छत खस्नेछ। तिब्बती नेतृत्वले उल्लेख गरेको यहि हो कि, यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नु हुन्छ। तपाईंले शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नु हुन्छ र त्यसमा हानि पुर्‍याउनु हुन्छ किनभने तपाईंले शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नु हुन्छ र त्यसको आधारमा तपाईंले बोधिसत्त्व र तान्त्रिक प्रतिज्ञा पनि तोड्नुहुनेछ। त्यसैले, हेरूका, यमन्तका, गुह्यासमाज, कालचक्र, हेवज्र, वज्रकिलय, आदिमा कुनै पनि अभ्यासहरूको कुनै फल हुनेछैन, किनभने हामीले प्राप्त गर्ने परिणामहरूको आधार भनेको हामीले गरेको प्रतिज्ञालाई सही तरिकाले अनुमोदन गर्दै लैजानु हो।
म दोहोर्‍याउँछु। हामीले ध्यानको अभ्यासबाट आफूले प्राप्ति पाउनको लागि आधार भनेकै प्रतिज्ञालाई राम्रोसँग अनुमोदन गर्नु हो। अब, यदि तपाईंको प्रतिज्ञा तोडिएको छ भने, तपाईं मूलतया: रित्ता मन्त्रहरू पढ्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, यदि तपाईं कारको इन्जिन हटाउनुहुन्छ भने कार, कार जस्तो देखिन्छ, यसका पाङ्ग्राहरू छन्, यसमा एक स्टेरिङ छ, यसमा सिट छ, यसमा सबै छन् तर यो कहिँ पनि जान सक्दैन। त्यसैले मूलतः, यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नहुन्छ भने, यो तपाईंको आध्यात्मिक कारको इन्जिन हटाए जस्तै हो। यही नै हो जुन (तिब्बती) नेतृत्वले हामीलाई बताइरहेका छन्।
अब, त्यसो भए, आउनुहोस् हामी यसलाई केही गहिराइमा गएर जाँचौँ। के तपाईंले मलाई दलाई लामाको मूल गुरु त्रिजंग रिन्पोछेले आफ्ना प्रतिज्ञाहरू तोड्नुभएको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? के उहाँले बोधिसत्त्व प्रतिज्ञा तोड्नुभएको छ? के उहाँले तन्त्रयनको प्रतिज्ञालाई तोड्नुभएको छ?
उहाँले दोर्जे शुग्देनलाई आफ्नो जीवनको अन्तसम्म अभ्यास गर्नुभयो। पवित्र क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांग ८१ वर्षसम्म बाँच्नुभयो र आफ्नो गुरुबाट पाएको शिक्षा सबै तोडियो, ती शिक्षाहरूलाई वैध र प्रभावकरी मानिएन किनभने उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ? त्यो नै तिब्बती नेतृत्वले हामीलाई बताइरहेका छन्।
त्यसोभए, यदि यो हो भने कुनै पनि शिक्षा त्रिजंग रिन्पोछेले जुन हामीलाई दिनुभएको छ, ती टुक्रेका छन्, अवैध र आशीर्वादविहीन छन् किनभने उहाँले आत्मालाई उपासना गर्नुहुन्थ्यो – दोर्जे शुग्देनको आत्मा। त्यसोभए, उहाँले जुन ज्ञान दलाई लामालाई दिनुभएको छ त्यो पनि टुक्रिएका छन्, सान्दर्भिक, शक्तिशाली छैन र आशीर्वादविहीन छन्। त्यसको मतलब, दलाई लामाले सम्पूर्ण विश्वलाई एउटा आत्मालाई उपासना गर्ने उपासकबाट आएको शिक्षा दिइरहनुभएको छ? के यो सम्भव छ?
के यो तार्किक छ?
गादेन मठमा, एक विशाल स्तूप छ, जुन ३०-४० वर्षदेखि अवस्थित रहँदै आएको छ। यो त्रिजंग रिन्पोछेको स्तूप हो, किनकी जब उच्च लामा बित्नुहुन्छ, तपाईंले उहाँको शरीरलाई दाहसंस्कार गर्नुहुन्छ, तपाईंले उहाँको शरिरलाई स्तूपभित्र श्रद्धाका साथ सुरक्षित राख्नुहुन्छ र मानिसहरूले स्तूपको वरिपरि परिक्रमा गर्दछन्।
अहिले गादेन मठमा त्रिजंग रिन्पोछेको एक स्तूप छ। त्यसोभए के त्यो स्तूप अमान्य छ? त्यो स्तूप दोर्जे शुग्देनको आत्माको उपासना गर्ने मानिसको हो। के यो तपाईंलाई तार्किक लाग्छ? मलाई त लाग्दैन। त्यसोभए त्यो स्तूप किन हटाइएन? किन आज पनि गादेनको सयौँ भिक्षुहरू त्रिजंग रिन्पोछेको स्तूपमा चक्रर लगाउँछन्? यो तर्कपूर्ण नै छैन। के तपाईंले मठबाट त्यी आत्माको उपासना गर्ने व्यक्तिको स्तूप हटाउनु पर्ने होइन र?
पवित्र क्याब्जे त्रिजंग दोर्जेच्यांग र पवित्र क्याब्जे जोङ्ग दोर्जेच्यांगको स्तूप गादेन शार्त्से मठमा। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब, हामी यसलाई अझै रोचक बनाऔँ। पवित्र दलाई लामाले आफ्नो कौटिल्य शैलीमा भन्नुभयो, “यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, निश्चित रूपले तपाईं तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ।” म दोहोर्‍याउँछु, “यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ भने तपाईंले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ।”
दोर्जे शुग्देनको अभ्यास शाक्यको समयदेखि नै हुँदै आएको छ। केही सर्वोच्च शाक्य विद्वानहरू र गुरुहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, मानिसहरूलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको दीक्षा दिनुहुन्थ्यो र दोर्जे शुग्देनको बारेमा शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। केहि महान् शाक्य गुरुहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभएको छ, हालैमा गर्नुभएको महान् शाक्यहरुमध्ये उच्च प्राप्ति हासिल भएका एक महान् गुरु पवित्र शाक्य ट्रिजिन द्राग्सुल ट्रिन्ले हुनुहुन्छ।
३०औँ शाक्य त्रिजंग सोनाम रिन्चेनको तस्विर
अब, यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो मृत्युपछि तीन तल्लो लोकमा जानुहुनेछ र यसको मतलब तपाईं एक आत्मा बन्नु हुनेछ या तपाईं नर्कमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। त्यसैले, यदि त्यो हो भने, त्यहाँ कुनै पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने अवतार लामा हुने छैनन् र उनीहरूको अवतार फेरि फर्किएर आउने छैन। म दोहोर्‍याउँछु, यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं मर्नु भएपछि, तीन तल्लो लोकमा जानुहुन्छ। यदि तपाईं तीन तल्लो लोकहरूमा जानुहुँदैन भने तिनीहरूले हामीलाई दोर्जे शुग्देनको बारेमा भनिरहेका कुराहरू गलत हुन्।
मेरो प्रश्न यो हो, तपाईंसँग यी सबै लामाहरू छन्, र यी सबै लामाहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ, र यहाँ दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने केहिको बारेमा मात्र भनिएको छ। म तपाईंलाई केही नामहरू पढेर सुनाउन चाहन्छु किनभने गएको ४०० वर्षमा दोर्जे शुग्देनको धेरै अभ्यासकर्ताहरू रहेका छन्।
३५औँ शाक्य सिंहासन धारक ताशी रिन्चेन, ३३औँ शाक्य सिंहासन धारक पेमा डुडुल वाङ्गचुक, ३१औँ शाक्य सिंहासन धारक कुङ्गा लोड्रो, ३०औँ शाक्य सिंहासन धारक सोनाम रिन्चेन।
अब यी शाक्य गुरुहरू, उहाँहरूमध्ये कोहीले त कङ्ग्सोहरू [पूर्ण गर्ने अनुष्ठानहरू] वा दोर्जे शुग्देनको पूजा प्रार्थनाहरूको रचनासमेत गर्नुभयो। उहाँहरूले मात्र प्रार्थना गर्नुहुन्थेन, उहाँहरूले प्रार्थनाहरू रचना पनि गर्नुहुन्थ्यो र मसँग उहाँहरूका केही रचनाहरू छन्: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/buddhas-dharma/dorje-shugden-lineage-holders-in-the-sakya-tradition-sonam-rinchen-kunga-lodro.html
दोर्जे च्यांग ग्याल्छेन शाक्य, गेन लामरिम्पा, राडोङ रिन्पोछे, क्याब्जे डेमा लोचो रिन्पोछे, ङवाङ्ग लोब्साङ्ग डाम्छो ग्याल्छेन, खेन्छेन ङवाङ्ग ग्यात्सो, खेन्सुर रिन्पोछे लोब्साङ्ग तेन्पा, कांग्युर रिन्पोछे, काङ्सार थुब्तेन कुङ्गा, कुत्साङ्ग रिन्पोछे, ग्याल्छे रिन्पोछे, लोब्साङ्ग सेराब रिन्पोछे, याम्चो रिन्पोछे, याक्चो रिन्पोछे, घेशे फुन्छोक ग्याल्छेन, डुङ्कर रिन्पोछे लोब्साङ्ग ट्रिन्ले, लाजा रिन्पोछे, कार्जे रिन्पोछ, ड्रुब्छेन रिन्पोछे, फुन्छोग रिन्पोछे, ग्यारा रिन्पोछे, ट्रिपोन रिन्पोछे, घेशे तेन्पा, ज्याकेल रिन्पोछे, मेली क्याब्गोन रिन्पोछे, जाम्पा खेडुप रिन्पोछे, नेशे टुल्कु रिन्पोछे, टुल्कु लोब्साङ्ग फुन्छोग, खुर्साङ रिन्पोछे, ल्हासाङ रिन्पोछे, निमा रिन्पोछे, घेशे जाम्पा खेत्सुन, खेन रिन्पोछे जाम्पा सोन्डु, ट्रिचेन लामा, न्याड्रु रिन्पोछे, पाङलुङ रिन्पोछे, घेशे सोनाम ग्याल्छेन, लिथ्याङ्ग क्याबगोन रिन्पोछे, खेन्पो घेशे लोब्साङ्ग जिन्पा, ट्रेहोर ख्यारपेन रिन्पोछे, उसु लोब्साङ्ग तेन्जिन, टुल्कु लोब्सांग येशे, फाग्पा ल्हा रिन्पोछे, डार्से टुल्कु रिन्पोछे, डुखोर टुल्कु तेन्जिङ गेले नामग्याल, ग्याल्छेन शाक्य रिन्पोछे, कोङदोङ रिन्पोछे, ड्रयाक्याब अनोर रिन्पोछे लोब्साङ्ग ग्याल्छेन, ङवाङ लोब्साङ्ग, तेन्पे ग्याल्छेन सेन्गे, लामा ड्रापा थार्यी, लामा कर्मा ग्याल्छेन गेन पेमा दोर्जे, योङ्गजिन थुब्तेन धाम्पा, छुल्टुल ग्याल्छेन डाम्छो, ङाछेन रिन्पोछे, लामा लोब्साङ्ग ङुदुप, नाम्खा तेन्जिङ वाङ्चुक, ख्युन्गसेर ट्रिचेन रिन्पोछे, गेन राब्गे, गेन जाम्याङ ग्यात्सो, चोक्त्रूल तेन्पे निग्मा, जेत्सुन जम्पाल दोर्जे, डाम्छो रिन्चेन जुंगनि, ङित्युल रिन्पोछे, घेशे सिन्गे रिन्पोछे, धोमेपा योन्टेन ग्यात्सो, दोमो घेशे रिन्पोछे, लामा शाक्य रिन्पोछे, घेशे कोनचोक ग्याल्छेन, घेशे ज्याङ्गचुब ग्याल्छेन, घेशे लोब्साङ्ग जिन्पा, घेशे लोब्साङ्ग फुन्छोक, पाङलुङ कुटेन ड्रुग्पा, पाङलुङ कुटेन डुन्पा, लदाख कुटेन, जम्पा लोब्साङ्ग, शार्पे रिन्पोछे, सिम्ला कुटेन, साम्दुप रिन्पोछे, खाम्ग्युक रिन्पोछे, कांगसार रिन्पोछे, चुट्रिकांग रिन्पोछे, घेशे थुब्तेन लोडेन, कार्चेन लोब्साङ्ग छोएदर, बम्बड्रब रिन्पोछे, लामा जामयाङ्ग खेड्रुप रिन्पोछे, घेशे लोब्साङ्ग फेन्डे, खेन्सुर तेन्जिङ शेरब, कुन्छेन जाम्याङ सेड्पा।
दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने गुरुहरूको सूची। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
मैले तपाईंको लागि पढेको यी केही लामाहरू हुनुहुन्छ जसले निश्चित रूपमा, खुल्ला र बिना कुनै शंका र दाबीका साथ दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गरे।
अब हामीसँग अन्य लामाहरूको समूह छ, जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो, जसले दोर्जे शुग्देनको दीक्षा, दोर्जे शुग्देनको अभ्यास र दोर्जे शुग्देनलाई बढावा दिनुभयो।
अन्य गुरुहरूको सूची जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्थ्यो। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याब्जे फबोङ्खा दोर्जे च्यांग डङ्पो, क्याब्जे फबोङ्खा चोक्त्रूल रिन्पोछे नेपा, क्याब्जे चोक्त्रूल रिन्पोछे सूम्पा, त्रिजंग दोर्जे च्यांग, त्रिजंग चोक्त्रूल रिन्पोछे, क्याब्जे जोङ्ग दोर्जे च्यांग, क्याब्जे दोमो घेशे चोक्त्रूल रिन्पोछे, घेशे राब्तेन, घेशे रेबतेन चोक्त्रूल रिन्पोछे, सार्पा चोजे जेत्सुन लोब्साङ्ग निमा पेलसाङ्ग्पो, क्याब्जे जेमे रिन्पोछे, क्याब्जे जेमे चोक्त्रूल रिन्पोछे, सर्कोङ्ग दोर्जे च्यांग, सर्कोङ्ग दोर्जे च्यांग गोमा, घेशे टेन्डर रिन्पोछे, घेशे टेन्डर चोक्त्रूल रिन्पोछे, गादेन ट्रिपा ग्याचिक्पा जेत्सुन लुंग्रिक नामग्याल पेलसाङ्ग्पो, गादेन सिंहासनको १०१औँ धारक, पवित्र गादेन ट्रिपा जेत्सुन लुंग्रिक नामग्याल। गादेन थ्रोन दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ताको पनि धारक हो। पान्चेन लामा गोङ्ग्पा, ९औँ पान्चेन लामा, १०औँ पान्चेन लामा, धापो बाम्चो रिन्पोछे, थुब्तेन टुल्कु रिन्पोछे, केन्सुर ङवाङ्ग थेकचोक शेरा मे, लामा येशे, नेचुङ्ग रिन्पोछे ओगेन थिन्ले, तक्त्र रिन्पोछे, क्याब्जे गाङ्गछेन रिन्पोछे, सोग्पू रिन्पोछे गुरु देव:, ग्यारा रिन्पोछे, केन्सुर रिन्पोछे जेत्सुन लोब्साङ्ग नोदु, गोशे रिन्पोछे, खेन्सुर लोब्साङ्ग थर्चिन, क्याब्जे ड्रागोम रिन्पोछे, क्याब्जे लती रिन्पोछे, क्याब्जे खेन्सुर रिन्पोछे जेत्सुन जम्पा येशे, क्याब्जे दग्याब रिन्पोछे, क्याब्जे गेले रिन्पोछे, हुतुक्तु काका जेत्सुन डाम्पा, घेशे केलसाङ्ग ग्यात्सो, क्याब्जे जासेप रिन्पोछे, क्याब्जे खेजोक रिन्पोछे, घेशे येशे वाङ्गचुक, क्याब्जे योङ्गयाल रिन्पोछे, घेशे खेन्राब गाजम, घेशे सुल्त्रिम तेन्जिन रिन्पोछे, रोङ्था ग्याब्गोन रिन्पोछे, घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन, क्याब्जे डेन्मा गोन्सा रिन्पोछे, क्याब्जे डेन्मा चोक्त्रूल रिन्पोछे, डेनमा गोन्सार चोक्त्रूल रिन्पोछे, डाग्री रिन्पोछे, खेन्सुर लोब्साङ्ग सेफेल, अजिङ्ग रिन्पोछे, जाम्पा चोजे पेलसाङ्गपो रिन्पोछे, जोङ्गलो रिन्पोछे, खेजोक रिन्पोछे, तेन्चोक रिन्पोछे, ड्राक्याब तोक्देन रिन्पोछे, छावा पुलथोक रिन्पोछे, सर्कोङ्ग त्रितुल रिन्पोछे, घेशे कोन्चोक छिरिङ रिन्पोछे, केन्सुर जेत्सुन कोन्चोक छिरिङ रिन्पोछे, ग्यात्सो रिन्पोछे, रिबुर रिन्पोछे, ग्यूतो केन्सुर जेत्सुन लोब्साङ्ग डेन्पा, कारी रिन्पोछे, जावा रिन्पोछे, चियारा रिन्पोछे सूम्पा, खेन्पो साङ्ग्पा योङ्गतेन, चाङ्ग्या रिन्पोछे, रिन्चेन गोन्पो रिन्पोछे, रिन्चेन गोन्पो चोक्त्रूल रिन्पोछे, घेशे लोब्साङ्ग खेद्रुब डाक्नाक रिन्पोछे, बुतोन रिन्पोछे, पारा रिन्पोछे, घेशे वाङ्गचुक, गोन्सार रिन्पोछे गुकोर्मा, गोन्सार चोक्त्रूल रिन्पोछे, खेन्सुर ङवाङ्ग डाक्पा रिन्पोछे, ट्रि-योङ्गजिन रिन्पोछे, सेरा मे कांग्यूर रिन्पोछे, घेशे थुबतेन रिन्पोछे, केन्सुर रिन्पोछे जेत्सुन लोब्साङ्ग पेन्डे सार गादेन कि केन्सुर, क्याब्जे रातो रिन्पोछे, घेशे ङवाङ्ग धार्गे, कुन्दलिङ रिन्पोछे, घेशे तेन्जिङ दोर्जे, ज्यामसेन रिन्पोछे, पान्चेन लामा र डुकोर रिन्पोछे, घेशे गेले ग्यात्सो खेन्सुर लोब्साङ्ग तेन्पा, जे गुङ्गथाङ रिन्पोछे, जाम्पा रिन्पोछे, रातो चोवार रिन्पोछे, लामा थुब्तेन फुर्वु रिन्पोछे, जाभा दाम्दीन रिन्पोछे, छको ङवाङ्ग ड्राक्पा, चोदेन रिन्पोछे, खाचेन लोसाङ्ग जोपा रिन्पोछे, १०२औँ गादेन ट्रिपा, चोयाङ दुल्जिन कुटेन, सांगछांग रिन्पोछे, डुबुम टुल्कु रिन्पोछे, सर्केन रिन्पोछे, खेन्सुर सोनाम ग्याल्छेन, दुल्जिन ड्राक्पा ग्याल्छेन, लामा मिसेल रिन्पोछे, सामधोङ्ग रिन्पोछे, शाक्य ट्रिजिन कुङ्गा निङ्गपो, शाक्य ट्रिजिन ड्राग्सुल र्थिनले रिन्चेन।
यी केही लामाहरू हुन् जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ वा गर्नुहुन्थ्यो। त्यसैले, धेरै जना हुनुहुन्छ।
माननीय दोमो घेशे रिन्पोछे। पवित्र क्याब्जे त्रिजंग चोक्त्रुल रिन्पोछेद्वारा मान्यता प्राप्त दायाँपट्टी तेस्रो दोमो घेशे रिन्पोछे। यो अवतारलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने सबै अभ्यासकर्ताहरूले पछिल्लो दोमो घेशे रिन्पोछेको वास्तविक अवतारको रूपमा व्याप्तरुपमा स्वीकार गर्दै आएका छन्। त्यहाँ कुनै विरोधाभास छैन किनभने दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ताहरूले दोर्जे शुग्देन एक पूर्ण प्रबुद्ध धर्म संरक्षक हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्छन्। त्यसैले उहाँको अभ्यास गर्ने महान् गुरुहरूले कुनै पनि शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नुभएको छैन र तीन तल्लो लोकमा जानुहुनेछैन र निश्चित रूपले मान्यता प्राप्त, उत्प्रेरित र धर्मका चक्रलाई सबै सम्भावित प्राणीहरूलाई लाभ दिनको लागी अर्को मानव रूपमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
पवित्र दलाई लामाद्वारा मान्यता प्राप्त गरेका अर्को दोमो घेशे रिन्पोछेको उम्मेदवार। दोर्जे शुग्देनको बहुमत अभ्यासकर्ताहरूले यो मान्यतालाई स्वीकार गरेका छैनन् र यसले प्रत्यक्ष रूपमा तिब्बती नेतृत्वको दावीको विरोध गर्दछ जसले दोर्जे शुग्देनको उपासना आत्मा अभ्यास हो भनेको छ। दोस्रो दोमो घेशे रिन्पोछे दोर्जे शुग्देनको विशिष्ट अभयासकर्ता हुनुहुन्थ्यो र तिब्बती नेतृत्वको तर्क अनुसार शुग्देनको अभ्यासमा रोक लगाउन, उहाँले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुपर्ने हो। यदि, उनीहरूको अनुसार दोस्रो घेशे रिन्पोछे शुग्देन उपासक हुनुहुन्छ, जो तेस्रो तल्लो स्तरमा पुनर्जन्म हुनुहुन्छ, त्यसोभए किन सीटीएले उहाँको पुनर्जन्मको पहिचान गर्न जोड गर्दछ? उनीहरूको तर्क अनुसार, उनीहरूको आफ्नो उम्मेद्वारहरू नक्कली अवतार हुन्। त्यसैले सीटीएले दोमो घेशे रिन्पोछेको उम्मेद्वारमा गरिएको पहिचान असंगत, झूटो र उनीहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमा लगाएको रोक तर्कसंगत छैन।
[मेरा लेखकहरूले तस्विर राख्नेछन्] अब, पहिलो दोमो घेशे रिन्पोछेले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँ बित्नुभयो, उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभयो र दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमा पुनः लाग्नुभयो। उहाँ बित्नुभयो र उहाँको अवतारलाई तिब्बती सरकारले मान्यता दिएको छ। रोचक कुरा भनेको त्यहाँ दुई दोमो घेशे रिन्पोछे छन्। एक तिब्बती सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त, र अर्का दोर्जे शुग्देनका मठहरूद्वारा मान्यता प्राप्त।
अब, मेरो प्रश्न यो छ कि यदि पहिलो दोमो घेशे रिन्पोछेले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र दोस्रो दोमो घेशे रिन्पोछेले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, किन तिब्बती सरकारले तेस्रो दोमो घेशे रिन्पोछेलाई पहिचान गर्दछ? के उहाँ पहिले नै तीन तल्लो लोकहरूमा हुनुहुन्न र? त्यसैले तिब्बती सरकारले तेस्रो दोमो घेशे रिन्पोछेको पहिचान गर्दै, उनीहरूले दोर्जे शुग्देन बारे आफ्नै जानकारीको विरोध गर्दैछन्। यदि तपाईं उच्च लामा भए पनि, उनीहरूको भनाई अनुसार दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ताहरू तीन तल्लो लोकहरूमा पुनर्जन्म हुन्छन्। त्यसोभए उनीहरूले तेस्रो दोमो घेशे रिन्पोछेलाई कसरी मान्यता दिए? उहाँ दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। तिनीहरू आफैँलाई विरोध गर्दैछन्।
क्याब्जे लती रिन्पोछेले मलाई व्यक्तिगत रूपमा प्रोत्साहित गर्नुभयो, म उहाँलाई चिन्छु र मलाई उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न भन्नुभयो। र जब मलाई कठिनाइ हुन्थ्यो, उहाँले मलाई ओरेकलको माध्यमद्वारा दोर्जे शुग्देनसँग परामर्श लिन भन्नुहुन्थ्यो। लती रिन्पोछेले जसले मलाई मलेसियामा आएर शिक्षा दिन भन्नुभयो। मेरा धेरै विद्यार्थीहरूले उहाँलाई भेट्ने सम्मान र सौभाग्य पाए।
क्याब्जे लती रिन्पोछे बितिसक्नुभएको छ र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ। मलाई थाहा छ लती रिन्पोछेले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो। यदि उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भने, कसरी पवित्र दलाई लामाले उहाँको अवतारलाई मान्यता दिनुभयो? के उहाँ तीन तल्लो लोकमा जानु भएन? मैले यो भन्न खोजेको होइन कि उहाँ जानुपर्ने हो। म भन्छु त्यहाँ शिक्षाहरूमा गल्ति छ।
माननीय क्याब्जे लती रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
घेशे राब्तेन जसलाई १४ औँ दलाई लामाद्वारा शिक्षा दिन, स्विट्जरल्याण्डमा पठाइएको थियो, जो गुरुहरूको पनि गुरु, एक विद्वान् गुरु, एक अत्यन्त उच्च प्राप्ति ध्यानकर्ता जसले स्विट्जरल्यान्ड जानु अघि १३-१४ वर्ष धर्मशालामा ध्यान गर्नुभयो।
घेशे राब्तेन अन्तसम्म पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिल्यै हार मान्नु भएन। कसरी उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभयो? दलाई लामाले उहाँको अवतारको पहिचान गर्नुभयो। दलाई लामाले उहाँको अवतार पाउनुभयो र उहाँ यस अवतारसँग सहमत हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ। यदि उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भने, कसरी तीन तल्लो लोकमा जानुभएन त?
माननीय राब्तेन रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
ग्यारा रिन्पोछे एक अर्का दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ। उहाँ तीन तल्लो लोकहरूमा जानुभएन।
माननीय ग्यारा रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
गादेन जाङ्छे मठका पहिलो सेरकोङ्ग दोर्जे च्यांग जेत्सुन ङवाङ्ग सुल्त्रिम दोन्देन, धेरै शक्तिशाली र विद्वान् दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नुभयो र उहाँको अवतार दोस्रो सेरकोङ्ग दोर्जे च्यांग जेत्सुन थुबतेन सेवाङ्गको रूपमा आउनुभयो। उहाँ बित्नुभयो र यो उहाँको वर्तमान अवतार हो। उहाँको वर्तमान अवतारलाई तिब्बती सरकारद्वारा पनि मान्यता प्रधान गरिएको छ। त्यसोभए उहाँ कसरी तीन तल्लो लोकमा जानुभएन? किन तिब्बत सरकारले लामाहरूलाई मान्यता दिएको छ जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र किन त्यसपछि उनीहरूले उहाँहरूको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ भने? यसमा तर्क छैन।
माननीय सेरकोङ्ग दोर्जे च्यांग। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो अन्य अभ्यासहरूको विरूद्धमा जाँदै हुनुहुन्छ। तपाईं आफ्नो प्रतिज्ञा तोड्नु हुनेछ र तपाईंले आफू समर्पित भएको शरण तोड्नु हुनेछ। यदि तपाईंले आफ्नो शरण प्रतिज्ञा तोड्नु भयो भने, तपाईंले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। यदि यो सत्य हो भने, कसरी यी सबै लामाहरूको पुनर्जन्म भयो यद्यपि उहाँहरूले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो? पवित्र दलाई लामा आफैँले यी पुनर्जन्म भएका लामाहरूको पहिचान गर्नुभएको छ। दलाई लामा आफैँले यी लामाहरूको अनुमोदित गर्नुभयो, यसमा कुनै तर्क नै छैन। यदि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने व्यक्ति तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म हुन्छ भने यी सबै लामाहरू कसरी फिर्ता आउनुभयो?
त्यसैले, तिब्बती सरकार आफैँले तीनवटा महान् मठहरूका दोर्जे शुग्देन लामाहरूको पुनर्जन्मलाई मान्यता दिन्छ। यदि उनीहरूले ती लामाहरूको अवतार जो दोर्जे शुग्देनको लामाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्वीकार गर्छन् भने, उनीहरूले जे भने त्यो सत्य होइन। कसरी यो सत्य होइन? किनभने तिनीहरू भन्छन्, यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईंले शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नुहुन्छ।
शरण प्रतिज्ञाहरू नै हाम्रा मूल प्रतिज्ञाहरू हुन्। जसले शरण प्रतिज्ञाहरू लिएको छ, उसले मठको नवभिक्षुका प्रतिज्ञाहरू वा पूर्ण-भिक्षु प्रतिज्ञा लिन सक्छ। यसबाहेक, तपाईंले बोधिसत्त्वको प्रतिज्ञाहरू र तान्त्रिक प्रतिज्ञाहरू पनि लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईंले आफ्नो शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नुहुन्छ भने तपाईंले आफ्नो नवभिक्षु प्रतिज्ञाहरू र पूर्ण-भिक्षु प्रतिज्ञाहरूका साथसाथै बोधिसत्त्वको प्रतिज्ञा र तान्त्रिक प्रतिज्ञाहरू सबै तोड्नुहुनेछ। त्यसपछि, यदि तपाईंले अभ्यास गरे पनि, कुनै उपलब्धिहरू प्राप्त गर्नुहुनेछैन। यदि तपाईंले उपलब्धि हासिल गर्न सक्नुहुन्न भने किन हामीले अभ्यास गर्ने?
तथापि, पवित्र दलाई लामा र तिब्बती सरकार भन्छन् कि यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तीन तल्लो लोकहरू, पशु लोक, भोकाएका भूतहरूको लोक र नर्क लोकमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। यी तीन तल्लो लोकहरू हुन्। त्यसैले, तपाईंले यिनीहरूमध्ये कुनै एकमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। तर त्यही समयमा, उनीहरूले यी लामाहरूको पुनर्जन्मलाई स्वीकार्छन् र तिनीहरूलाई अनुमोदन गर्छन्। यसमा तर्क नै छैन। र यीमध्ये अधिकांश दोर्जे शुग्देन लामाहरूको अवतार फर्केर आउनुभएको छ। पवित्र दलाई लामा आफैँले उहाँहरूलाई पहिचान र अनुमोदन गर्नुभएको छ।
त्यसैले यसमा कुनै तर्क छैन किनभने तिब्बती सरकार भन्छन् कि यदि हामी दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्छौं भने, हामी तीन तल्लो लोकमा जान्छौँ। यदि हामी तीन तल्लो लोकमा जान्छौँ भने, तिब्बत सरकारले कसरी यी लामाहरूको पहिचान गरे र मठहरूमा स्थापित गरे। के सत्य हो? नर्कमा गइन्छ वा नर्कमा गइँदैन?
यसैले यी लामाहरू तीन तल्लो लोकहरू, नर्क, जनावर र भूतका लोकहरूमा जाँदैनन्। त्यसैले, हामी जस्तै मानिसहरू, हामी जस्तै सामान्य मानिसहरू जो यी लामाहरूमा विश्वास गर्छन्, उहाँहरूको शरण लिन्छन् र दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्छन्,ती कोही पनि तीन तल्लो लोकहरूमा जाँदैनन्। के यो धेरै तर्कपूर्ण छैन?
पांगलुंग रिन्पोछे, क्याब्जे योङ्ग्याल रिन्पोछे, जावा रिन्पोछे, उहाँहरू सबै आफ्नो पछिल्लो जीवनदेखि नै दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ र यस जीवनमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अवतारहरू फर्केर आउनुभएको छ।
माननीय पांगलुंग रिन्पोछे, माननीय क्याब्जे योङ्ग्याल रिन्पोछे र माननीय जावा रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
मेरो पहिलो मूल गुरु, केन्सुर रिन्पोछे सेरा मे जेत्सुन लोब्साङ्ग थर्चिन एक आजीवन दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो। मलाई थाहा छ, उहाँले क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछेबाट दोर्जे शुग्देनको जीवन-समर्पण दीक्षा (सोग्ते) प्राप्त गर्नुभएको थियो। मलाई त्यो थाहा छ।
त्यसैले केन्सुर लोब्साङ्ग थर्चिन रिन्पोछेले क्याब्जे जोङ्ग रिन्पोछेबाट दोर्जे शुग्देन अभ्यास र दीक्षा पाउनुभयो। उहाँले दोर्जे शुग्देनलाई आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा अभ्यास गर्नुभयो र बित्नुभयो। दलाई लामाले उहाँको नयाँ अवतार पत्ता लगाउनुभयो र उहाँको नयाँ अवतार पहिचान गर्नुभयो र उहाँ फर्किनुभयो। त्यसोभए यो कसरी सम्भव छ?
माननीय केन्सुर लोब्साङ्ग थर्चिन रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
त्यसपछि महान् गुरु, महान् तान्त्रिक प्रकाण्ड विद्वान्, महान् सूत्र धारक, विनय धारक,गादेन शार्त्से न्यारी खाङ्गछेन शार्पा चोजे जेत्सुन लोब्साङ्ग निमा पेल्स्याङ्गपो एक महान् तान्त्रिक गुरु हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक र वंशावली प्राप्ति धारक जसलाई मेलै मेरो जीवनमा भेटेँ। उहाँ गादेन शार्त्से मठबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मेरो एक गुरु हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बित्नुभयो र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ। र उहाँको अवतार गादेन शार्त्से मठमा हुनुहुन्छ। त्यसैले शार्पा चोजे जेत्सुन लोब्साङ्ग निमाको अवतार गादेन शार्त्से मठमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण जीवनमा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो र उहाँले यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुभयो। उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई कहिल्यै त्याग्नु भएन। उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ र तिब्बती सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त हुनुहुन्छ।
मेरो पूर्व गुरु घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन। घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो जसले मलाई दोर्जे शुग्देनसँग परिचय गराउनुभयो र मलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न भन्नुभयो र मलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको लागि प्रोत्साहित गर्नुभयो। जब मैले अमेरिकामा कठिनाई भोगिरहेको थिएँ, म लगभग सोह्रदेखि अठाह्र वर्षको थिएँ। म यस महान् गुरुसँग बस्थेँ, घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन र उहाँले मलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न भन्नुभयो। उहाँले मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो र जब उहाँले आफ्नो गुरु जोङ्ग रिन्पोछेलाई अमेरिकामा निम्तो दिनुभयो, जोङ्ग रिन्पोछेले हामीलाई दोर्जे शुग्देनको जीवन-समर्पण दीक्षा प्रदान गर्नुभयो जसलाई सोग्ते भनिन्छ। उहाँ बित्नुभयो र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ र दलाई लामाद्वारा पहिचान प्राप्त हुनुभएको छ।
माननीय घेशे सुल्त्रिम ग्याल्छेन र माननीय घेशे टेन्डर रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
घेशे टेन्डरले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँको अवतार मंगोलियामा हुनुहुन्छ र उहाँ दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ।
लामा येशे दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भनेर राम्रोसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ फाउन्डेसन फर द प्रिजरभेशण अफ द महायाना ट्रेडिशन (एफपीएमटी) संगठनको आरम्भ गर्ने व्यक्ति, शुरूवातकार, प्रेरणा प्रदायक र संस्थापक हुनुहुन्छ। लामा येशे आफैँ र उहाँका पुस्तकहरू र शिक्षाहरू मार्फत, प्राय: मान्छेहरूलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न प्रोत्साहन गर्नुहुन्थ्यो। जब उहाँ बित्नुभयो, उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभयो। लामा यिशे कसरी तीन तल्लो तहमा जानुभएन? के तिब्बती सरकारको दिएको जानकारी शायद गलत छ वा दोर्जे शुग्देन साँच्चै एक आत्मा हुनुहुन्न र हाम्रो शिक्षकहरूले हामीलाई बताउनुभएको जसरि, वास्तवमा उहाँ मन्जुश्री हुनुहुन्छ? त्यसोभए, यदि तपाईं उहाँको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने अशुभ कुराहरू तपाईंको जीवनमा हुनेछैन, तपाईंको खराब पुनर्जन्म हुनेछैन।
श्रद्धेय लामा येशे र माननीय खरी केन्त्रुल रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
ठिक छ, महान् गुरु गादेन शार्त्से पुखाङ्ग खरी केन्त्रुल रिन्पोछे दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो, गादेनका एक महान् गुरु र अभिभावक। उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ।
हालको शताब्दीमा तिब्बतका सबैभन्दा नामी, सुप्रसिद्ध गुरुमध्ये एक क्याब्जे देन्मा गोन्सा रिन्पोछे हुनुहुन्थ्यो। क्याब्जे देन्मा गोन्सा दोर्जै च्यांग,जब उहाँ बित्नुभयो, उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभयो। तिब्बतका खाम क्षेत्रमा उहाँको एक विशाल दोर्जै शुग्देन पूजाघर छ।
क्याब्जे देन्मा गोन्सा रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याब्जे डगोम दोर्जे च्यांग मेरो एक गुरु हुनुहुन्छ र उहाँ एक विद्वान्, सज्जन, शुद्ध भिक्षु र एक विनय धारक गुरु हुनुहुन्छ – एक वास्तविक ‘डुल वा जीन पा’ – ‘दुल्जिन’। क्याब्जे डगोम दोर्जे च्यांगले ड्रेपुङ गोमाङ मठबाट दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो र दोर्जे शुग्देनको अभ्यासको दीक्षा दिनुभयो र मलाई प्रोत्साहित गर्नुभयो। उहाँ बितिसक्नुभयो, तर उहाँको निर्विवाद अवतार फर्केर आउनुभएको छ। त्यो कसरी सम्भव छ?
क्याब्जे डगोम रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याब्जे जेमे रिन्पोछे, जसले पहेँलो पुस्तकमा निङमा शिक्षाहरूको अभ्यास, दोर्जे शुग्देनले तपाईंलाई हानि पुर्‍याउनुहुनेछ र त्यसैले तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुँदैन भन्ने कुराहरू लेख्नुभएको थियो। जब पवित्र दलाई लामाले त्यो पहेँलो पुस्तक पढ्नुभयो, उहाँले दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई सन् १९९६ मा प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गर्नुभयो। क्याब्जे जेमे रिन्पोछेको मृत्यु भइसकेको छ र उहाँको अवतार फर्केर आउनुएको छ, तिब्बतको अध्ययन अनुसार राम्रो, उज्ज्वल, उत्तम, तीक्ष्ण, दयालु र धेरै मान्छेहरू उनलाई भेट्न जान्छन्। क्याब्जे जेमे रिन्पोछे फर्किनुभएको छ र खासमा, पहेँलो पुस्तकलाई सही तरिकाले व्याख्या गरिएको छैन।
क्याब्जे जेमे रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
मेरो मूल गुरु, पवित्र क्याब्जे जोङ्ग दोर्जे च्यांगले मलाई दोर्जे शुग्देनको दीक्षा दिनुभयो, उहाँको सम्पूर्ण जीवनमा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास र सयौँ विदेशीहरू, गैर-तिब्बती र तिब्बती र हजारौँ भिक्षुहरूलाई दोर्जे शुग्देनको जीवन-समर्पण दीक्षा दिनुभयो। उहाँ फर्केर आउनुभयो र उहाँले आफ्नो घेशे अध्ययन पूरा गरिसक्न लाग्नुभयो। उहाँ सिद्ध, सुन्दर, शिक्षित हुनुहुन्छ र उहाँले सिकाउनुहुन्छ, र दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ। कसरी जोङ्ग रिन्पोछे तीन तल्लो लोकमा जानुभएन? जोङ्ग रिन्पोछेको अवतारलाई दोर्जे शुग्देनको ओरेकल र दलाई लामाले एक साथ भेटाउनुभएको हो। म त्यहाँ थिए र म त्यसको साक्षी हुँ। हालको जोङ्ग रिन्पोछे, जब उहाँ बालकै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो पूर्व जन्मको मानिसहरूलाई पहिचान गर्नुभयो र ती मानिसहरूलाई नामले नै चिन्नुभयो। उहाँले उहाँहरूलाई स्पष्ट रूपमा सम्झनुभयो। किन उहाँ तीन तल्लो लोकमा जानुभएन?
माननीय क्याब्जे जोङ्ग दोर्जे च्यांग। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याब्जे लिङ रिन्पोछे शक्तिशाली दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थेन तर उहाँले दोर्जे शुग्देनलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। म दोहोर्‍याउँछु, क्याब्जे लिङ रिन्पोछे शक्तिशाली दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थेन तर उनले दोर्जे शुग्देनलाई सम्मान गर्नुहुन्थ्यो किनभने उहाँले दोर्जे शुग्देनको लगि प्रार्थनाहरू लेख्नुभएको थियो र उहाँको अवतार फर्किएर आउनुभएको छ। [मेरा लेखकहरूले अब तपाईंलाई दोर्जे शुग्देनका लागि उहाँले लेख्नुभएको प्रार्थनाहरू तिब्बती र अंग्रेजीमा देखाउनको लागि एक लिङ्क दिनेछन्: https://www.tsemrinpoche.com/tsem-tulku-rinpoche/dorje-shugden/kyabje-ling-rinpoche-does-dorje-shugden.html]
माननीय क्याब्जे लिङ रिन्पोछे। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
क्याब्जे फबोङ्खा दोर्जे च्यांगले दोर्जे शुग्देनको लागि पूजा र प्रार्थनाहरूको रचना गर्नुभयो। उहाँले यसलाई शाक्यबाट निकालेर, गेलुग्पाको लागि प्रार्थना संकलन गर्नुभयो। उहाँ बित्नुभयो र उहाँले थुप्रै दोर्जे शुग्देनका दीक्षाको प्रवर्तन गर्नुभयो। उहाँ बित्नुभयो र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ र यो उहाँको हालको अवतार हुनुहुन्छ। वर्तमान अवतार एक महान् गुरु, महान् विद्वान र हेरूका तन्त्रको महान् अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसोभए यदि फबोङ्खा रिन्पोछे खराब, दुष्ट, शरण प्रतिज्ञाहरू, तान्त्रिक प्रतिज्ञाहरू, बोधिसत्त्वका प्रतिज्ञाहरू तोडेका व्यक्ति हुनुहुन्छ भने कसरी उहाँ फर्कन सक्नुहुन्छ? दोर्जे शुग्देनले तपाईंलाई तीन तल्लो लोकमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने तर्कमा केही बेठिक छ जस्तो लाग्दैन? क्याब्जे फबोङ्खा रिन्पोछेको अवतार दलाई लामा र दोर्जे शुग्देन ओरेकलबाट भेटाइनुभएको हो। फबोङ्खा रिन्पोछेको अवतार फर्किएर आउनुभएको छ।
माननीय क्याब्जे फबोङ्खा दोर्जे च्यांग। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
पवित्र क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांग, हामी सबैलाई थाहा छ कि उहाँ, पवित्र १४औँ दलाई लामाको मूल गुरु हुनुहुन्थ्यो जो आफ्नो जीवनभरि दोर्जे शुग्देनको अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गुरुहरूको पनि गुरु हुनुहुन्छ र दसौं हजारौँ विद्यार्थीहरूको गुरु हुनुहुन्छ। मेरो पुस्ताको सबैजना र गादेन, सेरा, ड्रिफुङका सबै व्यक्तिहरूले त्रिजंग रिन्पोछेबाट शिक्षाहरू प्राप्त गरेका छन्।
माननीय क्याब्जे त्रिजंग दोर्जे च्यांग। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
उहाँले नै दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई फैलाउने काम गर्नुभयो र उहाँले दोर्जे शुग्देनको बारेमा टिप्पणीहरू गर्नुभयो, दोर्जे शुग्देनको दीक्षा दिनुभयो र आफ्मो सम्पूर्ण जीवन दोर्जे शुग्देनको प्रकृतिको बारेमा फैलाउँदै व्यतित गर्नुभयो। यद्यपि जब उहाँ बित्नुभयो, दलाई लामाले व्यक्तिगत रूपमा दोर्जे शुग्देनको ओरेकलसँगै उहाँको अवतार भेट्टाउनुभयो र उहाँको अवतार फिर्ता आउनुभएको छ।
दलाई लामाको भनाई अनुसार यदि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नु खराब हो भने, “यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने तपाईं तीन तल्लो स्थानमा जानुहुनेछ।”
पवित्र दलाई लामा भन्नुहुन्छ कि यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तीन तल्लो लोकहरूमा पुनर्जन्म लिनुहुनेछ। यदि तपाईंले तीन तल्लो लोकहरूमा पुनर्जन्म लिनुहुन्छ भने, कसरी लामाहरूको पुनर्जन्म भयो र कसरी यी लामाहरूको पुनर्जन्मको बारेमा स्वयम् पवित्र दलाई लामाद्वारा अनुमोदित भयो? यसमा तर्क छैन नि, होइन? यसको सट्टा, यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने कि त तपाईंले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म हुनुपर्नेछ वा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न कुनै समस्या छैन। दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमा कुनै पनि हानि छैन, त्यसैले लामाहरूले पुनर्जन्म लिनुहुन्छ। पवित्र दलाई लामा आफैँले भन्नुभएको छ कि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गगर्नेहरू तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म हुनेछन् तर उहाँ आफैँले दोर्जे शुग्देनका लामाहरूको पुनर्जन्मको अनुमोदन गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ आफैँले दोर्जे शुग्देनका लामाहरूको अनुमोदन गर्नुहुन्छ र उहाँहरूको साथ तस्विरहरू लिनुहुन्छ भने अवश्य पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुमा हानि छैन, छ त ?
त्यसैले दोर्जे शुग्देनको अभ्यासमा कुनै गल्ती छैन किनभने दोर्जे शुग्देनका लामाहरू फर्किएर आउनुभएको छ र त्यहाँ कुनै समस्या थिएन। जो मान्छेले भन्छन् कि दोर्जे शुग्देन नकारात्मक हुनुहुन्छ, दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने लामाहरूको पहिचान पनि गरिरहेका छन्। त्यहाँ एक समस्या छ।
अन्तमा, पवित्र ९औँ पान्चेन लामाले दोर्जे शुग्देनको पूजाघर टाशी ल्हुन्पोमा स्थापित गर्नुभएको छ र म आफैँले तिब्बतको यात्रा गरेको छु र टाशी ल्हुन्पो मठ र दोर्जे शुग्देनको मन्दिरमा भ्रमण पनि गरेको छु। मैले त्यहाँ प्रसाद ग्रहण गरेँ र मैले कालो चिया (सेरकिम), र भेटहरू चढाएँ र मैले मन्दिरको तस्बिर पनि खिचेँ।
पवित्र पान्चेन लामा। टाढाको दायाँमा सीटीए-मान्यता प्राप्त ११ औँ पान्चेन लामा। फेरि, कुनै पनि पान्चेन लामाको उम्मेद्वारको पहिचान उनीहरूले दोर्जे शुग्देनको उपासना गर्नेहरूले तीन तल्लो लोकमा जानुपर्नेछ भन्ने दाबीसँग असंगत छ। यदि उनीहरूको दाबी सत्य हो भने, १०औँ पान्चेन लामा जो दोर्जे शुग्देनमा समर्पित हुनुहुन्छ, पक्कै पनि तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनुपर्ने हो र यहाँ अवतार हुनु नपर्ने हो। त्यसैले, कुन तर्क वा सत्य, आधारमा सिटिएले पान्चेन लामा उम्मेद्वारलाई पहिचान गर्‍यो? उनीहरुका कामहरू दोर्जे शुग्देनको अभ्यासलाई रोक लगाउन उनीहरूले दिएको कारणहरूसँग पूर्णतया असंगत छन्। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
र ९औँ पान्चेन लामा तिब्बतका दोस्रो उच्चतम लामा हुनुहुन्छ र उहाँको मठ, टाशी ल्हुन्पोमा दोर्जे शुग्देनको मन्दिर छ। यो टाशी ल्हुन्पो मठ र प्रार्थना हल हो। यो दोर्जे शुग्देनको मन्दिर हो, र यो टाशी ल्हुन्पोमा भएको मन्दिर ९औँ पान्चेन लामाले दोर्जे शुग्देनका लागि समर्पित गर्नुभएको हो। यो तस्विर म आफैँ र मेरो टोलीद्वारा लिइएको थियो।
टाशी ल्हुन्पो मठ (छेम रिन्पोछेद्वारा तस्विर)। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो ९औँ पान्चेन लामाद्वारा स्थापित दोर्जे शुग्देनको मन्दिर टाशी ल्हुन्पो मठ हो। वास्तवमा, ९औँ पान्चेन लामाले फबोङ्खा रिन्पोछेलाई समारोह गर्नका लागि टाशी ल्हुन्पोमा निम्तो दिनुभएको थियो।
टाशी ल्हुन्पो मठमा दोर्जे शुग्देनको मन्दिर। (छेम रिन्पोछेद्वारा तस्विर)। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
यो संरक्षकको मन्दिर भित्र [र मेरो टोलीले तपाइँको लागि अपलोड गर्दै] हो।यो ९औँ पान्चेन लामाद्वारा प्रायोजित दोर्जे शुग्देनको मूर्ति हो, त्यसैले यो मूर्ति अहिले टाशी ल्हुन्पो मठमा छ र ९औँ पान्चेन लामाद्वारा स्थापित यस मूर्तिको उपासना उहाँले गर्नुहुन्थ्यो।
टाशी ल्हुन्पो मठमा संरक्षकको मन्दिर भित्र।(तस्विर छेम रिन्पोछेद्वारा)। विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
९औँ पान्चेन लामा जसले दोर्जे शुग्देनको स्थापना आफ्नो मठमा गर्नुभयो र दोर्जे शुग्देनको प्रार्थना मठमा गर्नुहुन्थ्यो। मन्दिर अझै त्यहाँ छ र उहाँले मृत्युवरण लिनुभएपछि १०औँ पान्चेन लामाको रूपमा पुनर्जन्म गर्नुभयो। १०औँ पान्चेन लामाले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो किनभने मसँग घनिष्ठ लामा मित्रहरू हुनुहुन्छ जो पान्चेन लामाको धेरै नजिक छन्, जसले दोर्जे शुग्देनको पूजा र कालो चिया अर्पण साथमा गर्नुहुन्थ्यो।
थप पढ्नुहोस्: पान्चेन लामाको दोर्जे शुग्देन पूजा पाठ
यो ९औँ पान्चेन लामाद्वारा प्रायोजन गरिएको दोर्जे शुग्देनको मूर्ति हो। (छेम रिन्पोछेद्वारा तस्विर) विस्तार गर्न तस्विरमा क्लिक गर्नुहोस्।
र, १०औँ पान्चेन लामाले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ बित्नुभयो, र ११औँ पान्चेन लामाको पुनर्जन्म भयो। ११ औँ पान्चेन लामालाई नेछुङ्ग र दलाई लामाद्वारा भेटाईएको थियो तर उहाँले आफ्नो पूर्व जन्ममा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभएको थियो। यदि उहाँले आफ्नो पछिल्लो जीवनमा दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो भने, कसरि मानवको रूपमा पुनर्जन्म लिन सक्षम हुनुभयो? त्यसोभए, उच्चतममा सर्वोच्चहरूले पनि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू फर्किएर आउनुभएको छ र नेछुङ्ग र दलाई लामाद्वारा उहाँहरूको अवतारको पहिचान भएको छ। के यो सबै तपाईंको लागि तार्किक छ?
दुई जना पान्चेन लामाका उम्मेद्वारहरूले तिब्बती बौद्ध समुदायमा संघर्ष र विभाजन बनाउनको लागि तिब्बती नेतृत्वले प्रयोग गरिरहेको विधिलाई प्रष्ट पार्दछ, त्यो हो – दोर्जे शुग्देनको उच्च लामाहरूको विभिन्न अवतारको पहिचान गरेर। सबै तर्कद्वारा, तिब्बती नेतृत्वले दोर्जे शुग्देनको लामाहरूको कुनै पनि पुनर्जन्मको पहिचान गर्नुपर्दैन किनभने यो उनीहरूले गरेको प्रचारको विरूद्धमा हुन्छ, जसले भन्छ, जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्दछन्, तिनीहरू तीन तल्लो लोकहरूमा पुनर्जन्म हुन्छन्। त्यसोभए किन दलाई लामा र तिब्बती नेतृत्वले गेधुन चोक्यी निमालाई ११औँ पान्चेन लामाको रूपमा पहिचान गर्‍यो? किन ११औँ पान्चेन लामा हुनुहुन्न भनेर संसारमा घोषणा गरिएन किनभने १०औँ पान्चेन लामा दोर्जे शुग्देन अभ्यासकर्ता हुनुहुन्थ्यो, अवश्य पनि उहाँले तीन तल्लो लोकमा पुनर्जन्म लिनु पर्ने?
त्यसोभए, मैले तपाईंलाई यो प्रमाण देखाउँदै छु, कि यदि तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, यो असम्भव छ कि तपाईं तीन तल्लो लोकमा जानुहुन्छ। यो पक्कै पनि असम्भव छ। धेरै लामाहरू हुनुहुन्छ जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ र उहाँहरू केवल शीर्षस्थ लामाहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू गएको अन्तिम १०० वर्षमा हुनुहुन्थ्यो जसको हामीसँग तस्विरहरू छन्। पछिल्लो ४०० वर्षमा, हजारौँ लामाहरू हुनुहुन्छ जसले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुभयो र मसँग त्यति बेलाको तस्विरहरू छैनन् किनभने २००, ३००, ४०० वर्ष पहिले त्यो समयमा क्यामरा थिएन। लामा चोङ्खापाले दोर्जे शुग्देनको बारेमा उल्लेख गर्नुभएन भन्दैमा, तपाईंले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्न भन्ने छैन। किन? त्यहाँ उच्च-प्राप्ति भएका लामाहरू हुनुहुन्छ जो लामा चोङ्खापा पछि आउनुभयो जसले दोर्जे शुग्देनलाई मान्जुश्रीको वास्तविक अवतारको रूपमा पहिचान गर्नुभयो।
त्यसोभए, हामी सीधा तरिकाबाट जाऔँ। यदि हामीले दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्छौं भने, के हामी तीन तल्लो लोकमा जान्छौँ? यदि हामी तीन तल्लो लोकमा जान्छौँ भने किन दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने शिक्षकहरू तीन तल्लो लोकमा जानुभएन? यदि उहाँहरू तीन तल्लो लोकमा जानुहुन्न भने, तिब्बती सरकारले उहाँहरूको अवतारको पहिचान गरेर आफैँसँग विपरित देखिरहेको छैन? तपाईं भएको भए दोर्जे शुग्देनको लामाहरूको अवतारको पहिचान नगर्नु हुने थिएन? किन तपाईं उहाँहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्न? जब तपाईंले तिनीहरूलाई पहिचान गर्नुहुन्छ, तपाईं मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्छ कि दोर्जे शुग्देनमा कुनै खराबी छैन। अन्यथा, यी अवतारहरू कसरी आउँछन्? म दोहोर्‍याउँछु। दोर्जे शुग्देनका लामाहरूको अवतारको पहिचान गरेर र उहाँहरूलाई मठहरूमा फेरि राख्नाले, तपाईंले संसारलाई दोर्जे शुग्देनको अभ्यासले,तपाईंलाई केही पनि खराब हुनेछैन भन्ने बताइरहनुभएको छ। के तपाईंले भन्नुभएको भनाइको खण्डन गर्दैन? त्यसैले, एकपटक यी सबै कुराहरूको बारेमा सोचौँ।
त्यसकारण, निष्कर्षमा, मैले भर्खरै महान् लामाहरूको अभ्यासको एक अंश देखाएको छु; उहाँहरूमध्ये धेरैसँग म परिचित छु वा मेरा शिक्षकहरूले भने अनुसार उहाँहरू ती लामाहरूसँग परिचित हुनुहुन्छ। तपाईंहरूमध्ये केहीले भन्नु होला, हामीले देखाएका केही जनहरूले दोर्जे शुग्देनलाई त्याग्नु भयो। उहाँहरूले दोर्जे शुग्देनलाई त्यागनुभयो तर उहाँहरूले दोर्जे शुग्देनलाई आफ्नो एक वा अन्य जीवनमा एक पटक अभ्यास गर्नुभएको थियो, यसले देखाउँछ कि दोर्जे शुग्देनको अभ्यास अप्रधान अभ्यास होइन। गेलुग्पाहरूले दोर्जे शुग्देनको व्यापक अभ्यास गर्दथे। सन् १९९६ मा दोर्जे शुग्देनमा रोक लाग्ने समयसम्म गेलुग्पाहरूबीच दोर्जे शुग्देनको व्यापक अभ्यास थियो।
त्यसोभए, यदि तपाईं दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईंले तपाईंको शरण प्रतिज्ञाहरू तोड्नुहुनेछ र तपाईं तीन तल्लो लोकहरूमा जान सक्नुहुन्छ। उहाँहरूमध्ये कोही पनि तीन तल्लो लोकमा जानुभएन। यसबाहेक, जसले ती व्यक्तिहरू तीन तल्लो लोकहरूमा जान्छ भनेका थिए, उनीहरू आफैँले नै जो दोर्जे शुग्देनको अभ्यास गर्ने लामाहरूको पहिचान गरेका छन्।
त्यसैले, म सबैजनाले यसको बारेमा सोच्नुहोस् भन्ने चाहन्छु। मैले भनेका सबै कुरा तर्कसंगत छन्, राम्रो तरिकाले सोचिएको छ र म दोहोर्‍याउन चाहन्छु। मैले पवित्र दलाई लामाको निन्दा गर्ने चाहना गरेको होइन। मैले केही पनि नकारात्मक भन्न चाहेको होइन र म पवित्र दलाई लामाको विरूद्धमा जान खोजेको पनि होइन। मेरो दलाई लामाप्रति आदर, प्रेम, विश्वास र विशाल सम्मान छ। त्रिजंग रिन्पोछे बित्नु केही समय अगाडि मात्र उहाँले भन्नुभएको थियो-, “भविष्यमा साधारण मानिसको नजरबाट, साधारण दृष्टिकोण, र साधारण बुझाइबाट दलाई लामा र दोर्जे शुग्देनबीच तालमेल नमिलेको जस्तो देख्नेछ। तर अन्ततः यी कुराहरूलाई हेर्ने दुई तरिकाहरू छन्। मूलभूत रूपमा, शून्यता हासिल गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन् र परम्परागत तरिकाहरू प्रयोग गर्दै, शून्यता हासिल नगरेका व्यक्ति हुन्छन्। त्यसैले, साधारण तरिकाले हेर्दा दलाई लामा, पवित्र दलाई लामाको दोर्जे शुग्देनसँग तालमेल नमिलेको र उनीहरू एक-अर्काको विरूद्धमा छन् जस्तो देखिन्छ। तर अन्तिम लोकमा त्यस्तो छैन; उहाँहरूले एक अर्कालाई सह्योप्ग गर्दै बौद्धधर्मलाई ठूलो जमातमा ल्याउन मद्दत गरिरहनुभएको छ।” अब, यो मलाई धेरै लामाहरू, घेशे र गुरुहरू जसले गादेन मठमा त्रिजंग रिन्पोछेबाट सुन्नुभएको थियो, उहाँहरूले मलाई भन्नुभएको थियो। त्यसैले, हामी यसो भन्न सक्दैनौँ कि, “त्रिजंग रिन्पोछेले भन्नुभएकोले,” म स्वीकार गर्दछु “वा” त्रिजंग रिन्पोछेले भन्नुभएकोले, त्यसैले, म स्वीकार गर्दिन। तपाईं स्वीकार गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यो त्रिजंग रिन्पोछेले भन्नुभएको थियो। यदि तपाईं स्वीकार गर्नुहुन्छ भने, तपाईं उहाँको आदर गर्दै हुनुहुन्छ र यदि तपाईंले यसलाई स्वीकार गर्नुहुँदैन भने, तपाईं उहाँलाई अनादर गर्दै हुनुहुन्छ। अनि तपाईं भन्नुहुन्छ कि तपाईं उहाँभन्दा पनि ज्ञानी हुनुहुन्छ। म उहाँभन्दा बढी विज्ञ होइन, त्यसैले म विश्वास गर्छु कि दलाई लामा र दोर्जे शुग्देन विश्वमा धर्म फैलाउनको लागि सँग-सँगै काम गरिरहनुभएको छ। म यो स्वीकार्छु।
यसैले, म पवित्र दलाई लामा र उहाँका परिचालकहरूलाई दोर्जे शुग्देनमाथिको यो कलंक हटाउन तीव्र रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। कृपया Tibet.net र DalaiLama.com बाट सबै नकारात्मक कुराहरू र लेखहरू हटाउन अनुरोध गर्दछु। Tibet.net र DalaiLama.com दुवैमा दोर्जे शुग्देन विरूद्ध जानकारी र खण्डहरू छन्। दलाई लामा आजको हाम्रो ग्रहको र २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा विशाल आध्यात्मिक प्रेरणाहरू र अगुवाहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ। आफ्नो ब्लगसाइटमा एक यस्तो खण्ड, जहाँ एक प्रकारको धार्मिक अभ्यासलाई हतोत्साहित गरिन्छ; यो उहाँको प्रतिष्ठा, नाम र अविश्वसनीय आध्यात्मिक गुरुको रूपमा रहेका यस्ता श्रेष्ठ जनलाई सुहाउँदैन। कल्पना गर्नुहोस् कि हामी मदर टेरेसाको वेबसाइटमा जान्छौँ, र त्यसपछि त्यहाँ एक खण्ड छ जसले “यदि तपाईं क्याथोलिक हुनुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो हुनुहुन्छ। यदि तपाईं ब्याप्टिस्टको अभ्यास गर्नुहुन्छ भने, तपाईं राम्रो हुनुहुन्न” भन्छ। यसले हामीलाई मदर टेरेसाको बारेमा कस्तो महसुस गराउनेछ? यो उहाँको प्रतिष्ठा, अभिमान र आध्यात्मिक स्तरको लागी मिल्दो हुँदैनथ्यो। यसैले, म दोर्जे शुग्देनलाई लगाएको सबै कलंकहरू हटाउनको लागि अनुरोध गर्दछु र म पवित्र दलाई लामालाई एक वाक्यमा अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि तपाईंले मान्छेहरूलाई यो भनी दिनुभयो भने, “दोर्जे शुग्देनका मानिसहरूलाई स्वीकार गर्नुहोस्, उनीहरू पनि मानिस हुन् र उनीहरू करूणाका योग्य हुन् र उनीहरू तिब्बती पनि हुन्,” सबै तिब्बतीहरू एकजुट भएमा दोर्जे शुग्देन र गैर दोर्जे शुग्देन मानिसहरू बीचको सबै विवाद समाप्त हुनेछन्। तपाईंको लागि केवल एक वाक्य र एक बयान हुन्छ। तपाईं धेरै शक्तिशाली हुनुहुन्छ।
तिब्बतीको संगतिको लागि म पवित्र दलाई लामासँग निवेदन गर्दछु। म पवित्र दलाई लामालाई सबै तिब्बतीहरूलाई एकजुट गराउन आग्रह गर्दछु। चाहे म एक मुस्लिम तिब्बती हुँ, इसाई तिब्बती, बौद्ध धर्मावलम्वी तिब्बती, गेलुग्पा, शाक्य, निङमा, काग्यू, बोन्पो, जोनाङपा तिब्बती; चाहे म यू-चोङ्गपा, अम्डोपा वा खाम्पा तिब्बत हुँ; चाहे म शुग्देनपा तिब्बती हुँ, जस्तो प्रकारको तिब्बती भए पनि म तिब्बती हुँ। म एक विदेशी भूमिमा जन्मेको हुँ, म तिब्बती भाषा राम्रोसँग बोल्न सक्दिन, यो मेरो गल्ती होइन किनभने मैले कहिल्यै पनि तिब्बती भूमिमा बस्न र सास फेर्न र तिब्बती संस्कृतिमा रम्न पाइँन किनभने हामीले हाम्रो देश गुमायौँ। त्यसैले, म तिब्बती नेतृत्वलाई सबै तिब्बतीहरूलाई एकताबद्ध गराउन, हाम्रो संस्कृतिलाई बचाउन, हाम्रो धर्मलाई बचाउन, हाम्रो विशेष जीवनशैली बचाउन आग्रह गर्न चाहन्छु, किनकी हामीलाई एकता चाहिन्छ। कृपया धर्म र क्षेत्रीयवादको कारण तिब्बतलाई अलग नगर्नुहोस्। सबैभन्दा महत्वपूर्ण, बौद्ध धर्मलाई अगाडि बढाउनको लागि, हामीले दोर्जे शुग्देनको विवादलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। यो तब अन्त्य हुन्छ, जब हामीले बुझ्छौँ कि हामी सबै मानवहरू हौँ र हामीसँग धर्म अभ्यास गर्ने अधिकार छ। दोर्जे शुग्देनको मानिसहरूको लागि, हामीले दलाई लामाको कुराकानीहरू, विशेषगरी धर्मनिरपेक्ष वार्तामा सहभागी हुनको लागी अनुमति दिनुपर्छ। उहाँ हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ। उहाँ हाम्रो अगुवा हुनुहुन्छ र यदि उहाँलाई केही भन्नु छ भने, हाम्रो धर्मको आधारमा पक्षपात बिना हामी त्यहाँ जाने र सामेल हुने अधिकार छ। त्यसैले, म गहिरो आदरको साथ अनुरोध गर्दछु, दोर्जे शुग्देको निन्दा र नकारात्मक कुराको अन्त गरियोस्, किनभने यो सबै असंगत छ।
म पवित्र १४औँ दलाई लामाको लामो आयु होस् भन्ने कामना गर्छु। म उहाँ सयौँ वर्षसम्म बाँच्नुहोस् र निरन्तर रूपमा राम्रो स्वास्थ्यको अनुभव र धर्मको चक्र घुमाउनुहोस् भन्ने चाहन्छु, किनभने उहाँले धेरै मानिसहरूलाई लाभ पुर्‍याउनुभएको छ। म बुद्धका शिक्षाहरूलाई दस दिशामा फैलाउन र गहिरो सम्बन्ध भएका व्यक्तिहरूले लाभ उठाउन् भन्ने चाहन्छु। म सबै मानिसहरू शान्ति र मेलमिलापमा रहेको हेर्न चाहन्छु र धर्म फूटको कारण होइन एकताको कारण होस् भन्ने चाहन्छु। म दोहोर्‍याउँछु। म धर्मको प्रयोग एकता, सहनशीलता, र समझदारीताको लागि होस् भन्ने चाहन्छु न कि विभाजन र मतभेदको लागि। अन्तमा, म चाहन्छु कि मेरो भिडियोले कोही पनि अप्रसन्न नहोउन् किनभने म कसैलाई दु:खी बनाउनको लागि बोलिरहेको छैन, म केवल जानकारी दिइरहेको छु। मेरो जीवनको मार्ग, मेरो धर्म, जसलाई मैले पछ्याएको छु, त्यो खतरामा छ। म उत्पीडन,पृथक्तावाद र अप्रतिष्ठा भोगिरहेको छु। मैले आफ्नो धार्मिक छनौटको कारण प्राय जसो दैनिकरूपमा अपमान र गालीगलौज सहनुपर्छ। आजको जस्तो २१औँ शताब्दीको संसारमा यस्तो हुनुहुँदैन। यस्तो हुनुहुँदैन।
मुरी मुरी धन्यवाद। मेरो ब्लगमा यी सबै कुराहरू छन्, तपाईंले यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र अबको लागि … रिन्पोछेद्वारा समर्पण प्रार्थनाहरूको पाठ।
डाग-सोग जिन-न्येह साग-पा गे-वा दी
टान-दाङ ड्रो-वा कुन-ला डाङ-फान दाङ
चे-पार जे-त्सुन लो-जांग ड्राग-पा यि
टान-पी निङ्ग-पो-रिंग-डु साल-शे शुग
मैले र अरूले संकलन गरेका यी पूण्य
सबै संवेदनशील प्राणी र बौद्धधर्मका लागि लाभदायक होस्
र विशेषगरि अचूक गुरू चोङ्खापाका महत्वपूर्ण शिक्षाहरू
स्पष्ट र चिरस्थायी रहोस्।
जांग-जुब सेम-चोक रिन्पोछे
मा-के पा-नाम क्ये-ग्युर चिक
क्ये-पा न्याम-पा मे-पा याङ्ग
गोंग-ना गोंग-दु पेल-वार शुग्
महत्वपूर्ण बोधी चित्त बढोस्,
जुन अहिले जन्मेर उदायको छैन
जन्म भएपछि कहिल्यै क्षय नहोस्
तर सधैँको लागि बढिरहोस्।
तोङ-नि तोङ्ग-वा रिन्पोछे
अनमोल शून्यता बढोस्
गे-वा डी-यी न्यूर-डु डाक
ला-मा स्याङग-ग्ये ड्रुप-ग्यूर ना
ड्रो-वा चिक-क्याङग मा-लु पा
यस सद्गुणद्वारा, म चाँडै नै
गुरु-बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकूँ,
र प्रत्येक संवेदनशील प्राणीलाई
त्यस प्रबुद्ध स्थितिमा स्थानान्तरण गर्न सकूँ।
चो खी ग्याल पो छोङ्ग खा पा
चो छुल नाम पार फेल वा ला
गेक कि छान मा झी वा दाङ्ग
थुन क्यिन मा लु छांग वार शोक
सबै अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होउन्
र सबै बाधाहरू शान्त होउन्,
अनन्त वृद्धि होवोस्,
आध्यात्मिक राजा चोङ्खापाको सिद्धान्त।
दा दाङ्ग शेन गी डु सुम दाङ्ग
ड्रिल वा छोक न्यी ला टेन ने
ग्या वा लो जाङ ड्राग पा यी
तान पार युन रिङ भार ग्युर चिग
मेरा र अरुहरूका पूण्यहरूको ३ समयहरूद्वारा,
लामा चोङ्खापाका सिद्धान्त सधैँ चम्किरहोस्।
गांगशिग ड्रेन्पा छाम्ग्यी चिनान्गी
बारचे कुन्स लेशे ट्रीन्ले नाम
छोल्जे ग्यालछेन शुग्देन रिग-ङा छे
तानसुङ्ग कोरदांग चेला चाग-साल तो
भित्री र बाहिरी सबै बाधाहरू,
पूर्णरूपमा हटाएर स्पष्ट पारि गतिविधिहरू पूरा गर्नुहुन्छ,
दोर्जे शुग्देन को ५ परिवारहरू,
तपाईंको महान् अनुचरहरू र सहयोगीहरूलाई म ढोग गर्दछु।
पवित्र १४औँ दलाई लामाको दीर्घायुको लागि समर्पित
गाङ्ग री रावे कोर्वाई सिङ्ग काम दिर
पेन दाङ्ग डेवा मालु ग्युङ्ग वाइ ने
चेन्रेजिग वाङ्ग तेन्जिन ग्यात्सो यी
शा पेई सिथई बारदु देन ग्यु चिग
हिउँ पर्वतले ढाकिएको यस पवित्र भूमिमा,
तपाईं सबै लाभ र आनन्दको स्रोत हुनुहुन्छ
हे शक्तिशाली चेन्रेजिग, तेन्जिन ग्यात्सो, तपाईंको कमल पाउ
यो संसारमा अन्तसम्म अस्तित्वमा रहिरहोस्।
मुरी मुरी धन्यवाद। अहिलेको लागि बिदा लिन्छु।
तपाईंको सहभागिताको लागि सबैलाई धन्यवाद। विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
प्रत्यक्ष प्रवाहको अवधिमा सहभागीहरूको संख्याबाट म एकदमै कृतज्ञ र आभारी छु। विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
प्रत्यक्ष प्रवाहको समयमा दर्शकहरूद्वारा दिइएका केही राम्रा टिप्पणीहरू। म तपाईंको सहभागिताको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
तपाईं सबैको प्रोत्साहनकारी टिप्पणीहरूको लागि धन्यवाद। विस्तार गर्न क्लिक गर्नुहोस्।
माननीय २५औँ छेम रिन्पोछेबाट
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको वेबसाइट
तल तिब्बती नेतृत्वको वेबसाइट Tibet.net को तस्विर छ। यो वेबसाइटको एक भागमा दोर्जे शुग्देनको बारे “जानकारी” छ जुन दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुप्रति घृणा, नकारात्मकता र अशिष्टता फैलाउने उद्देश्यले बनाइएको छ। कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक नेतृत्वले आफ्नो वेबसाइटमा एक धार्मिक समुहलाई लक्षित गरेर यस्तो कुरा राख्न सक्छ ? कल्पना गर्नुहोस्, यदि अमेरिकी वा क्यानाडेली वा कुनै अरु लोकतान्त्रिक देशका सरकारको वेबसाइटमा सर्वसाधारणको लागि यस्तो कुरा राखिएको भए कति हंगामा मच्चिन्थ्यो होला!
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन (सिटिए)को वेबसाइट जसमा दोर्जे शुग्देनप्रति एक सेक्सन छ । कुन प्रकारको लोकतान्त्रिक सरकारको आफ्नो वेबसाइटमा एक धार्मिक समुहलाई लक्षित गरिएको सेक्सन हुन्छ ? विस्तारको लागि क्लिक गर्नुहोस् ।
पवित्र दलाई लामाको वेबसाइट
यो DalaiLama.com को तस्विर हो जुन पवित्र दलाई लामाको आधिकारिक वेबसाइट हो । जब यस्तो सेक्सन पवित्र लामाको वेबसाइटमा हुन्छ, तब यसले तिब्बतीहरुलाई शुग्देन मान्नेहरुलाई अलग राखी भेदभाव गर्न बढावा दिन्छ। यो सेक्सन विशेषतः दलाई लामाको त्यस्तो व्यवहारको ‘समर्थन’ हो; जब शुग्देनविरोधी व्यक्तिले यो देख्छ, उसले सोच्छ कि यो आस्थाविरुद्ध यस्तो कार्य गर्नु ठिक हो “किनकि दलाई लामाले त्यसो भनेका थिए“. मलाई लाग्दैन कि दलाई लामा यसमा सहमत हुनुहुन्छ तर उहाँको वेबसाइटका वेबमास्टर र छायाँ लेखकहरुले यो प्रकारको दोर्जे शुग्देनविरोधी कुरा राख्नु हुँदैन जुन धर्मको कारण कुनै समूहमाथि भेदभावको पक्षमा छ। २१औँ शताब्दीमा यो पवित्र दलाई लामाजस्ता महान आध्यात्मिक नेतालाई सुहाउँदैन । भेदभाव नगर्नुहोस्, सहिष्णुता राख्नुहोस्; यो नै अघि जाने बाटो हो ।
यदि दोर्जे शुग्देन प्रतिबन्ध केवल सल्लाह हो र प्रतिबन्ध होइन भने वेबसाइटमा किन यस्तो सेक्सन आवश्यक छ?
पवित्र दलाई लामाको वेबसाइट जहाँ दोर्जे शुग्देनको सेक्सन छ । उक्त सेक्सनले शुग्देन मान्नेहरुविरुद्ध भेदभाव गर्न बढावा दिन्छ किनकि यो दलाई लामाबाट यस्तो व्यवहारको लागि समर्थन हो ।
निर्वासित तिब्बती संसदको सरकारी कर्मचारीले दोर्जे शुग्देनमा भरोसा गर्नु हुँदैन भनि गरिएको प्रस्ताव
सन् १९९६ मा तिब्बती नेतृत्वले प्रस्ताव पारित गर्यो जसमा सबै विभागहरु (र त्यसका कर्मचारीहरु)ले दोर्जे शुग्देनमा भरोसा गर्नुहुँदैन (बुंदा ८) भनेर भनिएको थियो । त्यो प्रस्तावमा ती व्यक्तिहरु जो उहाँको पुजामा संलग्न हुन्छन्, उनीहरुले दलाई लामाको जीवन र तिब्बती मुद्दालाई हानि गर्छन भनिएको थियो । यदि उनीहरुको श्रद्धालाई व्यापक रुपमा दलाई लामा विरोधि, सिटिए बिरोधि र विश्वासघाती भनि चित्रण गरिन्छ भने कसरी तिब्बती बस्ती र सरकारका कोही पनि खुलारुपमा दोर्जे शुग्देनको आस्थामा संलग्न हुन सक्छन् ? त्यसपछि खुला रुपमा दोर्जे शुग्देन मान्नाले उनीहरुले आलोचना, अशिष्टता, उत्पीडन र भेदभाव झेल्नुपर्नेछ जुन दोर्जे शुग्देन मान्नेहरु पछिल्लो २० वर्ष देखि भोगिरहेका छन् । उनीहरुसँग केवल तीन विकल्प रहन्छ: आफ्नो आस्था छोड्ने (जुन धेरैले गर्दैनन्), लुकेर मान्ने , वा आफ्नो जागिर छोडिदिने ।
tibet.net को तस्विर जसले १९९६ को प्रस्ताव देखाउँछ जुनमा भनिएको छ कि, तिब्बती नेतृत्व अन्तर्गतका विभागहरुले दोर्जे शुग्देनको पुजा गर्नुहुँदैन र त्यसो गरेमा दलाई लामाको जीवनलाई हानी गर्नेछ ।
निर्वासित तिब्बती संसदको दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई इतिहासमा अपराधी नाम गर्ने प्रस्ताव
यो केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनको आधिकारिक वेबसाइट tibet.net को तस्विर हो जसमा निर्वासित तिब्बती संसदको १७ मार्च २०१४ को दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई इतिहासमा अपराधी नाम गर्ने सर्वसम्मत प्रस्ताव (बुंदा ३, परिच्छेद २) देखाइएको छ ।
केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले १७ मार्च २०१४ मा दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई “इतिहासमा अपराधी” नाम गर्ने प्रस्ताव पास गर्यो । कुन आधारमा तिब्बती नेतृत्वले बृद्धबृद्धा, दुर्बल, बालबालिका र तिब्बती नागरिक नभएका सबै दोर्जे शुग्देनप्रति आस्था राख्ने मानिसहरुलाई अपराधीको रुपमा निन्दा गर्न सक्दछ?
भिडियो: दलाई लामाले दोर्जे शुग्देन मान्न प्रतिबन्ध लगाउनुभयो र भिक्षुहरुलाई निकाला गर्नुभयो
पवित्र दलाई लामाको २००८ मा द्रेपुंग गुम्बामा यो भनाई दर्ज छ, जसमा उहाँले स्पष्ट रुपमा दोर्जे शुग्देन आस्था त्याग्न नमान्नेलाई गुम्बाबाट निकाला गर्नपर्छ भन्नुभएको छ । पवित्रले यदि कसैलाई यो निर्देशन पालना गराउन गाह्रो भयो भने उनीहरुलाई दलाई लामाले दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई निकाला गर्नु भनेको भन्नु भनेर पनि भन्नुभएको थियो ।
मेरो प्रश्न यो छ कि: यदि दोर्जे शुग्देन मान्न छोड्ने केवल सल्लाह हो भने र हामीले कसलाई भरोसा गर्ने भन्ने कुरा हामीमा निहित छ भने आफ्नो आस्था मान्न चाहने मानिसहरुलाई किन यति ठुलो सजाय? पवित्रको यो भनाइको कारणले हजारौं शुग्देन भिक्षुहरु गुम्बाबाट निकालिए, र आफ्नै गुम्बा बनाउन बाध्य भए जहाँ उनीहरुले दोर्जे शुग्देनको आस्था जारी राख्न पाउंथे ।
भिडियो: गादेन गुम्बामा हमला
२० वर्षअघिबाट दोर्जे शुग्देनमाथि प्रतिबन्ध शुरु भएदेखि सिटिए (केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन)ले दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुका विरुद्ध घृणाले भरिपुर्ण अभियान चलाउँदै आएको छ । यो गरेर तिब्बती नेतृत्वले पवित्र दलाई लामाको करुणा र सहिष्णुताको मूल शिक्षा विरुद्ध काम गरिरहेको छ र त्यसकारण विश्वलाई आफ्नो कामको प्रकृतिबारे भ्रम फैलाइरहेको छ । तिब्बती नेतृत्वले आफ्नो कार्य संचालन गर्न पश्चिमाबाट ठुलो प्रायोजन र आर्थिक सहयोग लिन्छ तर ती रकम वास्तवमा तिब्बती समुदायको धार्मिक स्वतन्त्रता दबाउनका लागि दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुका विरुद्ध हिंस्रक दमन गर्ने विभिन्न अभियानका लागि खर्चिन्छन् ।
यो भिडियोले स्पष्ट देखाउँछ कि कसरी दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुले दोर्जे शुग्देनमा प्रतिबन्धका कारण विगत २० वर्षदेखि भयका साथ आफ्नो जीवन बिताएका छन् । तिब्बती नेतृत्व र समर्थकहरुले निरन्तर रुपमा विभिन्न हिंस्रक र छलपूर्ण तरिका अपनाएर दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई अलग गरी भेदभाव गरे पनि दोर्जे शुग्देन मान्नेहरु त्यसका विपरित लडेका छैनन् । यसको सट्टा, उनीहरु आफ्ना दोर्जे शुग्देन वंश लामामा र बिशेषगरि रक्षक देवताका सम्बन्धमा प्राप्त गरेका अभ्यास र शिक्षामा शान्तिपूर्ण भरोसामा निरन्तर अडिग छन् । यो भिडियोको मुख्य भाग सन् २००० मा लिईएको हो र यसले ३००० साधारण र दीक्षित तिब्बतीहरु दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुको समुहको विरुद्ध दंगा भड्काउने उद्देश्यले दक्षिण भारतको गादेन शार्त्से गुम्बामा अघि बढिरहेको देखाउँछ ।
प्रष्टीकरण: यो भिडियो तेश्रो पक्षको हो । हामीलाई यहाँ अपलोड गर्न अनुमति प्रदान गरिएको छ । यो भिडियो कुनै व्यावसायीक प्रयोजनका लागि प्रयोग भएको छैन, यो केवल शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग भएको हो ।
भिडियो: दोर्जे शुग्देन मान्ने व्यक्ति गादेन शार्त्से गेस्टहाउस गुम्बाबाट अस्वीकृत
दोर्जे शुग्देन मान्ने एक व्यक्ति दिल्लीको मज्नु-का-टिल्लास्थित गादेन शार्त्से गुम्बा गेस्टहाउसमा कोठाको दर सोध्दा होटेलका कर्मचारीले उनलाई अस्विकार गर्दै त्यहाँबाट निक्लिन भने ।
भिडियो: फ्रान्स २४ को दोर्जे शुग्देनको मुद्दाबारे रिपोर्ट
फ्रान्स २४, फ्रान्सको एक प्रतिष्ठित समाचार संस्था हो जुन आफ्नो निष्पक्ष पत्रकारिताको शैलीका लागि चिनिन्छ । उनीहरुले आफ्नो च्यानलमा दोर्जे शुग्देनको मुद्दाबारे विस्तृत रुपमा देखाएका छन् । यसबारे च्यानलमा यति धेरै समय दिनुले उनीहरुको यो मुद्दामाथिको गम्भीरता झल्काउँछ । भिडियोमा फ्रान्स २४ले दोर्जे शुग्देन भिक्षुको विरुद्धमा भएको भेदभाव कैद गरेको छ ।
भिडियो: अल जजिराको दोर्जे शुग्देनको मुद्दाबारे रिपोर्ट
मध्य पुर्वस्थित अल जजिरा, मिडियामा पश्चिमी संस्कृतिको प्रभावको प्रतिउत्तरमा बनेको थियो। उनीहरु अरु समाचार एजेन्सीले देखाउन हिच्किचाउने विवादास्पद विषयमा पत्रकारिता गर्नका लागि चिनिन्छन् र घटनाको कठोर तथ्यका साथ निष्पक्ष पत्रकारिता गर्छन्।
वर्षौंदेखि मेरा विद्यार्थीहरुले दोर्जे शुग्देनविरुद्धको प्रतिबन्धको प्रमाण/सबुतहरु जम्मा गरेका छन्। व्यक्तिगत रुपमा म निराश र दु:खी हुन्छु कि उनीहरु यति धेरै प्रमाणहरु जुटाउन सफल भए किनकि यसले देखाउँछ कि यो प्रतिबन्ध कति धेरै व्यापक रुपमा फैलिएको छ। तपाईं तल देख्न सक्नु हुन्छ कि, दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई प्रतिबन्धको सूचना तिब्बती बस्तीमा जतासुकै भेट्टाउन सकिन्छ। चाहे दोर्जे शुग्देन मान्ने व्यक्तिलाई स्वास्थ उपचार गर्न होस् वा रेस्टुरेन्ट छिर्न होस् वा पसलबाट केहि सामान किन्न होस् उनीहरु सबै ठाउँमा प्रतिबन्धित छन् र उनीहरुलाई ती सेवाबाट बन्चित गरिएको छ। यो केवल ‘सल्लाह’ मात्र कसरी हुनसक्छ जब दोर्जे शुग्देन मान्नेहरुलाई तिब्बती समुदाय र बस्तीमा यति धेरै हिंस्रक प्रभाव परेको छ?
Sponsored by: Jeffral Chin Tat Meng and family
« Tsem Rinpoche and China | 詹杜固仁波切与中国
तिब्बत चीनसँग मित्र हुनुको महत्त्व »
More articles from Dorje Shugden / Great Lamas & Masters / Live Videos / नेपाली